အချစ်နယ်ကျွံ (အသက် ၁၈နူစ်အောက်များ လုံးဝ မဖတ်ရူကြရန်): ဒေါ်ရွှေ
ကျွန်တော်ဟာ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာ ပေ့ါပါးအေးစက် တဲ့ လူပျိုစစ်စစ် အချိန်များကို မသိလိုက် မသိဖာသာဘဲ ဖြတ်သန်း စီးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်..။
ဆယ်တန်းစာမေးပွဲတွေ ပြီးတော့ အတောင်ညောင်းငှက်လို ခဏနားခိုရင်း ဟိုဟိုဒီဒီ လေ့လာမိတော့ ဖို၊မ ဆက်ဆံရေးအပေါ် လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ ရင်ခုန်သံများက ပြန့်ကြဲ လာမိပါတော့တယ်..။
ဒီအချိန်မှာ လူတကိုယ်လုံးပူလောင် ခြောက်ကပ်သွားစေ လောက်တဲ့ ခံစားမှုမျိုးတွေကို ခံစား တတ်လာသလို ၊ အိမ်မှာ အဝတ်လာလျှော်တတ်တဲ့ အိမ်နီးချင်း ဒေါ်ရွှေ ရဲ့ အဝတ်လျှော်စဉ်လန်ထားတဲ့ ပေါင်သား ဖြူဖြူ ကြီးတွေကို တိတ်တခိုး အိပ်မက် မက်မိ လာပါတော့တယ်..။
မိန်းမ ကိစ္စ (ဖိုမ ကိစ္စ) နဲ့ ပတ်သက်လျှင် ဒေါ်ရွှေဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အိပ်မက်ဦး ဆိုတာ ခေါင်းငုံ့ ဝင်ခံရမှာပါဘဲ..။ ဒေါ်ရွှေအမျိုးသားက မအောင်မြင်သေးတဲ့ ကျောက်အရောင်းအဝယ် သမားပါ..။ တစ်လမှာ လေးငါးဆယ်ရက်သာ ချစ်သော မိန်းမနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက် နှင့်အတူ နေနိုင် ရှာသူပါ..။သူတို့အိမ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ရဲ့ ထောက်ပံ့မှုတော်တော်များများ နဲ့ ရှင်သန်နေတာမို့ ဒေါ်ရွှေဟာ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကို အိမ်ဦး ကြမ်းပြင်လို ဝင်ထွက်သွားလာနေခဲ့ပါတယ်..။ ဒေါ်ရွှေဟာ အသက် ၃၅ နှစ် အရွယ် သွားနည်းနည်းခေါ သလိုရှိ ပေမယ့် ရုပ်ပျက်လောက်အောင် မဟုတ်၊ မျက်လုံးအိမ်က ကျယ်ပေမယ့် မျက်ကျော သေသလိုမျိုး ရှိပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းထူထူ သာမာန်နှာခေါင်း ရှိပြီး မျက်ခုံးကတော့ ယောက်ျားမျက်ခုံးမွှေးလိုကို ထူပါတယ်။ ဆံပင် ဂုတ်ကျော်ကျော်လောက် ရှိပြီး ဆံပင်ကို အမြဲစည်းထား၊ ညှပ်ထားတတ်ပါတယ်။ အသားကတော့ တရုတ်မလို ကို ဖြူပါတယ်။ ခန္တာကိုယ်က ခပ်ဖိုင့်ဖိုင့် ရှိပါတယ်။ ခါးနေရာက မဆိုစလောက်ကလေး ကျင်သွားပြီး တင်တွေ၊ နို့တွေကတော့ အလွန်ကို ထွားပါတယ်။ ဒေါ်ရွှေဟာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ အချိန်က လွဲလို့ ဘယ်တော့မှ အငြိမ်မနေတတ်ဘဲ အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်နေတတ်ပါတယ်။
မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ ဒေါ်ရွှေ့ကို စိတ်ဝင်စားသွားတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ အရင်လို(အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်ဖက်က) ချောချောမွေ့မွေ့မဟုတ်တော့ပါဘူး..။ ဒါကို ဒေါ်ရွှေက ကျွန်တော်အမေကို "အစ်မ အနီကောင်က ကျွန်မ ကိုအရင်လိုမခေါ်တော့ဘူး၊ လူပျိုဖြစ်လာလို့ထင်တယ်" ဆိုပြီးသွားတိုင်ပါသေးတယ်။ သူတို့အိမ်မှာ ရေအခက်အခဲရှိတဲ့ ဒေါ်ရွှေတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ အိမ်အပြင်မှာ ရှိတဲ့ ရေတိုင်ကီတွေ မှာ ရေချိုးအဝတ်လျှော် လုပ်ရင်း ကျွန်တော်တို့ တအိမ်သားလုံး အဝတ်တွေကိုပါ ဖွတ်လျှော်၊ မီးပူတိုက် ပေးတတ်ပါတယ်..။
ကျွန်တော်တို့အိမ်ဟာ နှစ်ထပ်အိမ် ဖြစ်ပြီးတော့ ၊ ကျွန်တော့်အခန်းက အပေါ်ထပ်မှာရှိပြီး တစ်အ်ိမ်လုံး မှန်တံခါးတွေ တပ်ထားပါတယ်.။ တစ်ရက်မှာတော့ ညပိုင်း စာဖတ်ပြီး အိပ်တာနောက်ကျလို့ ကျွန်တော် နေမြင့်တဲ့အထိ (၁၀ နာရီ)လောက်ထိ အိပ်နေမိပါတယ်.။အိပ်နေရင်းက ဒေါ်ရွှေနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက် ရဲ့ဆူဆူညံညံအသံများကြောင့် နိုးလာပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ဒေါသထွက် သွားပြီး ကလေးတွေကို အော်ဖို့ ပြတင်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ ရေချိုးတဲ့ ရေတိုင်ကီရှေ့မှ ကလေးနှစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်လုံးတီးလေးတွေ နဲ့ အမေဆပ်ပြာတိုက်လို့ မျက်စိ စပ်တာကို အော်ဟစ်ရင်း ရေတောင်းနေကြပါတယ်.။ ဒေါ်ရွှေက"
ဟေ့ကောင်တွေ ရေတွေ ဗုန်းဗောလအော မလုပ်နဲ့" လို့ ပြန်အော်ရင်း ဆပ်ပြာတိုက်ပေးနေပါတယ်.။ ဒီမြင်ကွင်းကြောင့် ကျွန်တော့် ဒေါသများ ငုပ်လျှိုးသွားပြီး ဘာရယ် မဟုတ်ဆက်ကြည့်နေဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီအချိန်မှာ အငယ်ကောင်က ဒေါ်ရွှေ ထမီကို ဆွဲပြီး ရေတောင်းတာမှာ ထမီလျှောကျပြီး....ကြီးမားထွားကြိုင်းပြီး ဖြူဖွေးနေတဲ့ ဒေါ်ရွှေရဲ့ နို့ကြိး တစ်ဝက်နီးပါးကို ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရပါတယ်..။ ရင်ထဲမှာ ဘလောင်ဆူပြီး ခြေတွေလက်တွေအေး၊ အာခေါင်တွေခြောက်ပြီး ကတုန်ကယင်နဲ့ ရှက်သွားသလိုလို ဖြစ်မိတာနဲ့ ပြတင်းပေါက်ကို ပိတ်လိုက်မိပါတယ်.။
သို့သော် ခဏ အကြာမှာပဲ မျက်စိထဲမှာ တဝဲလည်လည် ဖြစ်နေတဲ့ ဒေါ်ရွှေ နို့ဖြူဖြူ ကြီးကို ထပ်မံတွေ့မြင်လိုစိတ်တွေ နဲ့ ကယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်ပြီး အနီကောင် တစ်ယောက် ပြတင်းပေါက်နားကို တုန်ယင်သောခြေလှမ်းများနဲ့ ချဉ်းကပ်မိပြန်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်း တစ်စုံတစ်ယောက်များ ငါချောင်းနေတာမြင်သွားရင် အရှက်ကွဲရချည့်ရဲ့ ဆိုပြီး မျက်နှာတွေ ထူပူပြီး အာခေါင်တွေ ခြောက်ကပ်နေပါတယ်။ ရှက်စိတ်၊ကြောက်စိတ် ၊စိုးရိမ်စိတ်များသည် ဒေါ်ရွှေရဲ့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရင်နှစ်မွှာ စွဲအားအောက်မှာ မရှုမလှ ကျရှုံးခြင်းမက ကျဆုံးပြီး ပြတင်းပေါက်ဘေးမှာ ဒေါ်ရွှေရဲ့ ရေချိုးပုံများကို တိတ်တခိုးကြည့်နေမိပါတော့တယ်။
ဒေါ်ရွှေသည် အလုပ်မှန်သမျှကို အားရပါးရ လုပ်တတ်သူဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ရေချိုးရာမှာလည်း အားရပါးရ လျှင်လျှင်မြန်မြန်ချိုးတတ်ပါသည်။ ရေများကို တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက် ထမီရင်လျားထားသော ဖြူဖွေး လုံးအယ် နေသော ပခုံးနှစ်ဘက် ထက်သို့ လောင်းချပါသည်။ ရေလေးငါးခွက်လောင်းပြီးလျှင် ထမီရင်လျားသည် အနည်းငယ်အောက်သို့လျောကျ လာတတ်ပြီး အိပ်မက်ထဲထိ စိုးမိုးတတ်သည့် ဖြူဖွေးကြီးမားလှသော နို့နှစ်လုံး၏ အပေါ်ပိုင်းတစ်ဝက်နီးပါး မြင်တွေ့ရတတ်သည်။ တခါတရံ ရေစိုထမီကို ဖြန့်ဝတ်တတ်သလို အခါပေါင်းများစွာ ရင်ဝအနီးမှ ထမီကို လက်နဲ့ ဆွဲတင်တတ်ပါသည်။ ကျွန်တော် ရင်အခုန်ရဆုံး အချိန်က ရေစိုထမီ ကို လဲလှဲသော အချိန်နဲ့ ဆပ်ပြာတိုက်သော အချိန်ပါ.။ ဆပ်ပြာတိုက်လျှင် နို့နှစ်လုံးကို ထမီအောက်ထိ နှိုက်တိုက်ပါသည်။ ငုတ်တုပ်ထိုင်ပြီး အဖုတ်ကို လက်နှိုက် တိုက်တတ်သလို ခြေဆင်းထိုင်ပြီး ပေါင်အထိ ထမီလှန်ကာ ဆပ်ပြာတိုက်ပါသည်။ဒေါ်ရွှေ ရေချိုးတာကို စိတ်ဝင်စားလာသည့် အားလျော်စွာ ကျွန်တော့် အနေအထိုင်များ၊ အချိန်အသုံးပြုမှု များသည်လည်း စိတ်ဝင်စားရာကို အားပေးလာသည်။ ကျွန်တော် နံရံကပ် ပြက္ခဒိန်တစ်ခု ဝယ်ဖြစ်သည်။ နေ့တိုင်း ဒေါ်ရွှေရေချိုးသော အချိန်များကို ခဲတံနဲ့ ရေးမှတ်ထားသည်။ ဒေါ်ရွှေသည် တစ်နေ့ကို ရေ နှစ်ခါ အနည်ဆုံးချိုး တတ်သည်.။ မနက် ၉ နာရီခွဲ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ညနေ ၅ နာရီ ပတ်ဝန်းကျင်။
ထိုအချိန်မတိုင်ခင် နာရီဝက် လောက် အလိုကတည်းက ကျွန်တော်သည် မိမိတိုက်စစ်ဖွင့်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရသည်.။ ပြသနာတစ်ခုက ပြတင်းပေါက်အားလုံးသည် မှန်အကြည်များဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်တော်အတွက် စိတ်ချလက်ချ အားရပါးရ မချောင်းရပေ။ အရာရာကို သတိထား၍ ချောင်းရသည်။ ချောင်းနေရင်း နဲ့လည်း တိုက်စစ် ဖွင့်သည့်အခါ ဖွင့်နိုင်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ဒေါ်ရွှေ ရေချိုးတာမြန်သော်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ အပေါ်ထပ်မှာ လူသံကြားသော်ကြောင့်လည်းကောင်း တိုက်စစ် မဖွင့်နိုင်ချေ။များသောအားဖြင့်တော့ ရေချိုးနေသော ဒေါ်ရွှေ့ပုံရိပ်များကို အလွတ်မှတ်သားပြီး ရေချိုးခန်းထဲတွင် တစ်ယောက်တည်း ဂွင်းတိုက်ဖြစ်သည်သာ များသည်။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တစ်နေ့တာ အချိန်ဇယားသည် မိုးလင်း အိပ်ယာထ၊ ချောင်း၊ ထမင်းစား၊ စာဖတ်၊ဗီဒိယိုကြည့်၊ရေချိုး ၊ဂွင်းတိုက်၊ ချောင်း၊စာအုပ်ဆိုင်သွား၊ လက်ဖက်ရည်သောက် ၊အိပ် ဖြစ်လာပါသည်။
April လ အပူလွန်ကဲလာသည့်အချိန်ညတစ်ည မှာတော့ ရေချိုးသံကြောင့် အိပ်ပျော်နေတဲ့ ကျွန်တော် နိုးလာပါတယ်.။ ဒေါ်ရွှေရေချိုးတာပဲ ဆိုတဲ့အသိနဲ့ အတင်းလူးလဲထ ၊ မျက်လုံးကို ပွတ်ပြီး ချောင်းပါတော့တယ်..။ အဲဒီညက ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ ကျွန်တော်အခန်းကို မီးပိတ်ပြီး ဖြစ်တဲ့အပြင် အပြင်မှာက လရောင်ကော၊ မီးရောင်ကို ထိန်ထိန်လင်းတဲ့ ညပါ။ ရင်ခုန်စရာအကောင်းဆုံး ပြာလဲ့လဲ့ ညတစ်ညပါ။
ကျွန်တော်လည်း ပြတင်းတံခါးကို မသိမသာ ဟလိုက်ပြီးပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီးချောင်းပါတော့တယ်။ ဒေါ်ရွှေသည် ထိုနေ့က နက်ပြာရောင် ထမီကို ရင်လျားထားပါတယ်။ ဖြူဖွေးတဲ့အသားအရေကို နက်ပြာရောင် ထမီက ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့အတွက် ပိုမိုဖြူဖွေး ဝင်းဝါ စေပါတယ်။ ညကြီးမိုးချုပ်မှ ခေါင်းလျှော် ထားဟန်လည်း တူပါသည်။ ရေကို ခေါင်းပေါ်မှ လောင်းချ နေပြီး ၊ ကြည်လင်သော ရေတို့သည် နက်မှောင်သော ဆံပင်တို့ နှင့် ဖြူဖွေးသော ခန္ဖာကိုယ် ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းပြီး နက်ပြာရောင် ထမီထဲသို့ ငြိမ့်ညောင်းစွာ ဝင်သွားပုံမှာ ကျွန်တော်စိတ်ကို တရွရွ ဖြစ်စေပါသည်။ ကျွန်တော်မျှော်လင့် တောင့်တ နေတဲ့ အတိုင်း ဒေါ်ရွှေဟာ ဆပ်ပြာခွက်ကို ကိုင်လိုက်တာနဲ့ပဲ ကျွန်တော့် ရင်အစုံဟာ တဒုန်းဒုန်းမြည်လျက် ခြေဖျားလက်ဖျားတွေပါ အေးစက် လာပါတော့တယ်။ ဒေါ်ရွှေဟာ မျက်နှာ နဲ့ လက်များကို ဆပ်ပြာတိုက်ပါတယ်.။ပြီးတော့ ထမီရင်လျားကို အောက်ကို လျောချလိုက်ပါတယ်.။ ဖြူဖွေးထွားကြိုင်းလှတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးဟာ ထမီရဲ့ ကာကွယ်မှုအောက်မှ လွတ်မြောက်ကာ တဆတ်ဆတ်တုန်နေပါတယ်။ လရောင်နဲ့ မီးရောင်အောက်မှာ ထွန်းလင်းနေတဲ့ နောက်ထပ် လ နှစ်စင်းလိုပါပဲ။ ဒေါ်ရွှေနို့သည် ကြီးမားလှသော်လည်း (ကျန်းမာရေးကောင်းသူမို့ ထင်) အလွန်အမင်းအောက်သို့ လျောကျခြင်းမရှိပါ။ ပြီးတော့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆပ်ပြာသုတ်ထားတဲ့လက်နဲ့ ဟိုပွတ် ဒီပွတ် ပွတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ ဖီးအလွန်တက်လာလို့ ကိုယ့် ညီလေးကို ကိုယ်ကိုင်လိုက်တော့ မယုံနိုင်စရာ ကောင်းအောင် ညီလေးက သေးငယ်ရှုံတွနေပါတယ်.။ ကျွန်တော် အံ့သြ အားငယ်သွားမိပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဒေါ်ရွှေ ရေချိုးတာကိုပဲ စိတ်ဝင်တစားဆက်ချောင်းမိပါတော့တယ်။ ဒေါ်ရွှေသည် ထမီကို အနည်းငယ်လျော့ကာ မတ်တပ်ရပ်လျက်က အဖုတ်နေရာ နဲ့ ဖင်ပိုင်းတွေကို လက်နဲ့ ဆေးကြောသုတ်သင်ပါတယ်။ ဒေါ်ရွှေလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို ဖြူဖွေးကြီးမားလှသော နို့ကြီးနှစ်လုံးက စည်းချက်ညီညီ လိုက်လံတုန်ခါ ပေးနေပါတယ်။ ဒေါ်ရွှေသည် ထမီကိုရင်မလျားတော့ပဲ ရေများကို အဆက်မပြတ်လောင်းချိုးပါတော့တယ်.။ ဆပ်ပြာမြှုပ် ဖြူဖြူများသည် ဒေါ်ရွှေရဲ့ လှပကြီးမားလှသော နို့ဖြူဖြူကြီးနှစ်လုံးပေါ်က နေ မဆင်းချင်ဆင်းချင် ဖြင့် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားကြပါတယ်။
တိုင်ကီအတွင်းမှ ရေက အလွန်နည်းလာဟန် ရှိတော့ ဒေါ်ရွှေသည် တိုင်ကီအောက်ကို ရောက်အောင် အနည်းငယ်အားစိုက်၍ ရေခပ်ရပါသည်။ ထိုသို့ အားစိုက်ရာတွင် နို့ဖြူဖြူကြီးနှစ်လုံးသည် တိုင်ကီ အစွန်းနဲ့ ဖိကပ်ပြီး ဖင်ကြီးကို ကုန်ပြီးခပ်ရာ ဖင်ကြီးမှာ လည်း ကြီးမားပြန့်ကားစွာ နောက်သို့ တွန်းထွက်နေပါသည်.။ ကျွန်တော်လည်း ညီလေးကို ကိုင်ပြီး တိုက်စစ် ဖွင့်ပါသော်လည်း ညီလေးသည် ကြီးမားလာခြင်းမရှိ။ ဖီးလ်ကား အလွန်တက်နေချေပြီ။ ဒေါ်ရွှေသည် ရေချိုးလို့ ဝ ဟန် ဖြင့် လက်နှစ်ဖက်ကို လွဲ၍ ခါပြီး ကျွန်တော့်ဖက်သို့ မျက်နှာမူကာ ခါးကိုလိမ်ပြီး ချိုးလိုက်ရာ ကျွန်တော့အား နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုပင့်ကာကော့ပြသကဲ့သို့ ရှိလေရာ ကျွန်တော့်မှာ မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ညီလေးကို လက်နဲ့ အရမ်းဆောင့်မိပါတော့သည်။ ဒေါ်ရွှေသည် ရေလဲထမီကို ယူကာ ထမီရင်လျားလိုက်ချိန် တွင်တော့ ကျွန်တော်သည် လီးအနည်ငယ်သာမာလာပြီး အရည်ထွက်၍ ဆုံးခန်းတိုင်သွားပါတော့သည်.။ ဒေါ်ရွှေ လရောင် အောက်တွင် ထမီလျော်နေသည်ကို ကျွန်တော်လည်း ငူငူကြီးကြည့်နေရင်းက ကျွန်တော့် အကြောင်းကို ကျွန်တော်ကြောက်လန့်စွာ တွေးနေမိပါတော့တယ်..။ကျွန်တော့်စိတ်တွေအရမ်းလှုပ်ရှားနေပါသည်။ ဒေါ်ရွှေကို ချောင်းထားတာက တစ်ကြောင်း၊ကျွန်တော် ဖီးလ် အလွန်တက်သော်လည်း လီးမတောင်သည်ကိုစိုးရိမ်တာက တစ်ကြောင်းကြောင့်ပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းနေသဖြင့် ကျွန်တော်ဒူးတွေတောင် မခိုင်ချင်သလိုလိုဖြစ်နေသဖြင့် ကုတင်ပေါ်မှာပလက်လှန်ပြီး ခဏနားနေရပါတော့တယ်။ အတန်ကြာမှ ကုတင်ပေါ်မှထကာ အောက်ထပ်သို့ဆင်းလာပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ရေအေးအေးတစ်ခွက်ကို အငမ်းမရသောက်မိပါတယ်.။ ကျွန်တော်စိတ်များ အတော်အတန်တည်ငြိမ်လာတော့မှ ပန်းသေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ဖီးလင်ရှိလျက် မတောင် နိုင်တာလား၊ ဖီးလင် ကို မရှိတာလား ဆိုတာကို သိချင်လာပါတော့တယ်.။ ဒီလိုနဲ့ အဲနေ့ည ကုန်ဆုံးပြီး နောက်တစ်နေ့မှာ ဆ၇ာတင်ရမယ့်၊ စိတ်ချရမယ့် လူတစ်ယောက်ကို လိုက်ရှာ ရပါတော့တယ်။စဉ်းစားရပါတော့တယ်။ ဒီမှာ စာအုပ်အငှားဆိုင်က ကိုအောင်အောင့်ကို သတိရမိတော့တာပါပဲ။
ဒါနဲ့ နောက်နေ့မနက်စောစောမှာ စာအုပ်အငှားဆိုင်က ကိုအောင့် ဆီကို လက်ဖက်ရည်သောက်သွား ခေါ်ရင်း မိမိလိုရာဖက်ကို ဆွဲပြီးစကားကို နည်းနည်းတောက်ကြည့်ပါတယ်။သူသိသလောက်တော့ ပြောပြသော်လည်း ကျွန်တော်လိုချင်သော အချက်အလက်များကို သေချာမရောက်ပါ..။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖွင့်မမေးရဲပါ။သူ့ဆီမှ အချက်အလက်တစ်ခု ရတာက ဒေါက်တာမောင်မောင်ညိုသည် လိင်နှင့်ပတ်သက်သော ဆေးပညာများကို စာအုပ်ထုတ်ဝေကြောင်းပင်။”ကိုအောင့် ဆီမှာသူ့စာအုပ်တွေ ရှိလား” ဆိုတော့ သူဆီမှာ မရှိဘဲ မြို့ထဲက စာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ညွှန်းလိုက်ပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း အချိန်ဆွဲမနေတော့ဘဲ ဆိုင်ကယ်လေးပေါ်တက်ခွပြီး ကိုအောင်ပြောသောစာအုပ်ဆိုင်ကို ရောက်ခဲ့ပါသည်။ စာအုပ်ဆိုင်တွင် ဆိုင်ပိုင်ရှင်မိန်းမကြီးထိုင်နေပြီး ကျွန်တော်ဝင်သွားသွားချင်း
“ရဲမာန် ဘာစာအုပ်လာရှာလဲ၊ မေမေ တို့ကော နေကောင်းကြရဲ့လား “ ဆိုပြီး နှုတ်ခွန်းဆက်သ ပါတော့တယ်။(ကျွန်တော့် နာမည်သည် ရဲမာန်၊ရဲရဲ၊အိမ်တွင်အနီကောင်)
ကျွန်တော်လည်း “လိင်အကြောင်းသိကောင်းစရာ” ဆိုသောခေါင်းစဉ်မျိုးကို ဒီအန်တီကြီးရှေ့မှာ ဘယ်လိုမှ ဝယ်လို့ မဖြစ်တာ သေချာသွားလေပြီ။နောက်စာအုပ်ဆိုင်ဆိုတာကလည်း ကျွန်တော်တို့မြို့မှာ ကရွှေထက်ရှားပေမည်။ ကျွန်တော်လည်းစိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့
“ အန်တီ ဆိုင်ကကောင်မလေးတွေ မရှိလို့လား” ဆိုပြီး တည့်မေးလိုက်ရာ
“သားရေ သူတို့က စာမေးပွဲရှိလို့ ဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကို အန်တီပဲ ဆိုင်ထိုင်ရမယ်” ဆိုတဲ့အဖြေကို ရပါလေရာ ကျွန်တော်လည်း ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်နေပြီး ရွှေဥဒေါင်းရဲ့ ဝတ္တုတစ်အုပ်ကို ကောက်ကိုင်ပြီး မြည်းကြည့်နေချိန်ဝယ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဆိုင်ထဲသို့ဝင်လာကြောင်း ရေမွှေးနံ့ နှင့် နှုတ်ဆက်သံတို့ကြောင့်သိလိုက်သည်။ ကျွန်တော်လည်း ရွှေဥဒေါင်းစာအုပ် ကို ဝယ်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး ဆိုင်ရှင် အန်တီကြီးဆီအလာတွင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က အခြားတစ်ဖက်မှ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုင်ပြီး ဆိုင်ရှင် အန်တီ ထံလျှောက်လာလေသည်။ အမျိုးသမီးသည် အသားဖြူဖြူ၊မျက်ခုံးကောင်းကောင်း၊ စွဲဆောင်မှု ရှိသော ရုပ်ရည် ရှိပေသည်။ ကျွန်တော်တို့ တပြိုင်နက်နီးပါး ကောင်တာကို ရောက်သဖြင့် ကျွန်တော့် ထုံးစံအတိုင်း အားနာစွာနဲ့သူ့ကို ဦးစားပေးကာ မျက်နှာကို ထပ်မကြည့်ရဲသဖြင့် အမျိုးသမီး၏ ခြေချောင်းလေးများကို ကြည့်နေမိသည်။ သူ့ခြေထောက်ကလေးသည် အလွန်လှပါသည်။ စီးလာသော ခြေညှပ်ဖိနပ်လေးနဲ့ အလွန် လိုက်ဖက်ပါပေသည် ဟု စိတ်ထဲမှ ချီးကျူးမိပြီး အမျိုးသမီးလက်ချောင်းကလေးများကို ကြည့်လိုစိတ်ပြင်းလာသောကြောင့် ခိုးကြည့်မိ၏။ လက်ဖြူဖြူလေးပေါ်တွင် အမွှေးနု ဝါကျင်ကျင်လေးများက လက်ဖျံတလျှောက်တွင် ရင်ခုန်ဖွယ်အတိ။ လက်ချောင်းသွယ်သွယ်ရှည်ရှည်လေးတွေ ကိုလက်သည်းနီ ပန်းရောင်ဆိုးထားပြီးလက်ခုံတလျှောက် တွင် မွေးညှင်းစိမ်းလေးများ။ လက်ထဲတွင်တော့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုင်ထားသည်။ စာအုပ်ပေါ်တွင်
သိပ္ပံ နည်းကျ ဖိုမ ဆက်ဆံရေး
ကျွန်တော့်ရင်ထဲက တစ်စုံတစ်ခုသောတွန်းအားက ဒုန်းကနဲ အသံကြီးမြည်ပြီး တွန်းပို့လိုက်သလို အမျိုးသမီးမျက်နှာက်ို ကျွန်တော့် အသိမပါဘဲနဲ့ အလိုအလျောက် သေချာကြည့်မိလိုက်ပါတော့သည်။ သူရဲ့ လှပတဲ့ နှုတ်ခမ်း နီနီလေး တစ်ဖက်ကို အပေါ်သို့ တွန့်ကွေးလျက် ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြပြီးချာကနဲ လှည့်ကာ ကားကားစွင့်စွင့် တင်များကို တစ်လုံးချင်းလှုပ်ခါသွားအောင် လျှောက်လှမ်းထွက်ခွာသွားသည်။ ကျွန်တော်သာ ပါးစပ်အဟောင်းသား နဲ့ကြက်သေသေလျှက် ကျန်ခဲ့သည်။ အဲဒီနေ့တစ်နေကုန် ကျွန်တော့် ပြသနာကို ရှာဖွေဖို့နည်းလမ်းများကို လက်လျော့လိုက်ရပြီးနောက် အကြံအိုက်နေစဉ် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ တစ်မြို့လုံးအနှံ့ဟိုမှ ဒီသို့ ဆိုင်ကယ်ဦးတည့်ရာ လျှောက်မောင်းနေမိပါတော့သည်။အကြော်ဆိုင်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ဘုရား နေရာမျိုးစုံလည်းရောက်ခဲ့ပြီ၊ပိုက်ဆံပါသမျှလည်းကုန်ပြီ။
ညနေစောင်းမှာ လေကောင်းလေသန့်ရှူပြီးတစ်ယောက်တည်း ထိုင်လို့ရမယ့်နေရာကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းထိုင်ချင်ပါတယ် ဆိုမှ ၈ တန်းတုန်းက ကျောင်းထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းဟောင်းတစ်ယောက်နဲ့ ပက်ပင်းကြီးတွေ့လို့ စကားစမြည်ပြောနေရပါသေးသည်။
“ကိုရဲ မင်းဆယ်တန်း ဖြေနိုင်လားကွ။”
“မဆိုးပါဘူးကွာ၊အောင် ကောင်းပါရဲ့၊ မင်းကော စီးပွားရေးကောင်းရဲ့လား”
“အေး ကောင်းတယ် လို့ ပြောလို့ရတယ်ကွ၊ ငါကျောင်းကထွက်တော့ (ဗီဒီယို)ခွေငှားဆိုင်မှာ လုပ်နေတာ၊ တစ်နှစ်ခွဲလောက်အဲ့မှာ လုပ်ပြီးတော့ သူတို့လုပ်နေတဲ့ ပုံစံနဲ့ အမြတ်အစွန်းကို နားလည်လာတော့ ငါ့ဆိုင်ကယ်ကို ရောင်းပြီး အခု ကိုယ်ပိုင် အငှားဆိုင် ထောင်လိုက်တယ်ကွ။ ခု တစ်နှစ်နီးပါး ရှိတော့ ဗီဒိယိုရုံ နှစ်ရုံပါ ---ထဲ နဲ့---ထဲမှာ ထောင်ထားတယ်ကွ။ ဗီဒီယိုရုံမှာ မုန့်တွေ ဆေးလိပ် ကွမ်းယာပါ တင်တယ်လေကွာ။ င့ါညီမ မိမိ တို့ရောင်းတာပေါ့။ ကွမ်းကတော့ သူများဆီက ယူရောင်းတယ်ကွ။ အခုဒီနားက ကွမ်းဆိုင်ကို အော်ဒါ ကိစ္စ လာပြောတာကွ။ “
“အေး ဒီနားက ---ဆိုင်လား၊ ကွမ်းကောင်းတယ်လို့တော့ ငါကြားဖူးတာပဲ”
“မင်းကော အခုဘာတွေ လုပ်ဖို့ရှိလဲ၊ DSA ဖြေမှာလား၊ ကျောင်းပဲတက်မှာလား၊ နိုင်ငံခြားတွေဘာတွေ သွားမှာလား”
“ငါလား မသိသေးပါဘူးကွာ။ အမှတ်ကလည်း ရှိသေးတာကိုး”
သူငယ်ချင်းနဲ့ စကားကောင်းနေချိန်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့လာနေသည်ကို သတိထားမိသည်။ ကျွန်တော်မှတ်မိပါသည်။ ကျွန်တော်ရင်ခုန်သံကလည်း သူ့ကို မှတ်မိကြောင်းသက်သေ ပြပါသည်။ စာအုပ်ဆိုင်မှာ ဟိုစာအုပ်ဝယ်သွားသည့် အမျိုးသမီး။
လေအလွန်တိုက်သော ထိုနေရာတွင် အမျိုးသမီးဝတ်ထားသော ထမီစကတ်အကွဲသည် လက်နဲ့ထိန်းနေသည့်ကြားက စက်ဘီးနင်းလိုက်တိုင်း ဖြူဖွေးသော ခြေသလုံးသားကစ်ကစ်လေးမှသည် ဒူးလုံးလုံးပြည့်ပြည့်လေး အထိ လန်လန်တက်နေသည်။ ထမီစကတ်ကို လက်နဲ့ ကုန်းဖိနေရသောကြောင့် ဆံပင်ကျောလည်လောက်သည် ရှေ့သိုဝဲကျကာ မျက်နှာကိုဖုံးအုပ်ပြီးလေတွင် တဝဲဝဲ တလွင့်လွင့်။အင်္ကျီအသားကလည်း စပန့်သားကဲ့သို့ပျော့ပြောင်းပါးလှပ်သော အသားဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ သူမ၏ခန္ဒာကိုယ် အပေါ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအတိုင်းသား။ ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကအဖြတ်တွင် သူက ပြုံးယောင်ယောင် မျက်နှာပေးနဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကို ကြည့်သွားသည်။ ကျွန်တော်သည်လည်း သူမကျော်သွားသည် နှင့်သမင်လည်ပြန်သည်အထိ လိုက်ကြည့်မိသည်။ သူမ၏ လုံးကျစ်ပြန့်ကားသော ထိုင်ခုံထက်မှ တင်သားများသို့။
ကျွန်တော့်အကြည့်ကို ရိပ်မိသော သူငယ်ချင်းက
“ နှင်းတို့ကတော့ မိုက်တုန်းပဲ”
“ဘယ်သူ။ မင်းသူ့ကို သိလို့လား”
“နာမည်ကြီးလေကွာ တော်တော်များများသိကြတယ်။ မင်းသာ အိမ်တွင်းပုန်းမို့ မသိတာ”
“ဘယ်လို နာမည်ကြီးတာလဲ ကွ”
“သူငယ်ချင်း ငါအခုပြောမှာ အတင်းလိုမျိုးဖြစ်နေမယ်။ ငါသိသလောက် မင်းကို စေတနာနဲ့ ပြောတယ်လို့ပဲ စိတ်ထဲမှာ မှတ်ထားကွာ။ ဒီစော်က
နည်းနည်းရှုပ်တယ်၊ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေ တော်တော်များများ ဒုက္ခရောက်တတ်ကြတယ်လို့ကြားဖူးတယ်။မြင်ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပုံမျိုးနဲ့ဒုက္ခရောက်သလဲတော့ ငါလည်းသေချာ မသိဘူး။ကဲငါဆိုင်သွားပြီး ညကား ပြဖို့ အခွေတွေ ရုံတွေကို ပို့ရဦးမယ်။”
“ညကား ဆိုတာ ဘာလဲကွ ဟဲ ဟဲ”
“ဟေ့ကောင်ရေ အဲလိုကားလေးတွေတခါတလေပြပြီး ကြေငြာရတာပေ့ါကွာ။မင်းပျင်းရင် ဆိုင်လိုက်ခဲ့လေ”
ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲတွင်အတွေးတစ်ချက်လက်သွားသည်။ အောကားကြည့်လျှင် ကျွန်တော်ပန်းသေမသေ သိနိုင်ပေတာပဲ။
ကျွန်တော်အလွန်ပျော်သွားသည်။ စိတ်ထဲမှာ လွတ်လပ်သွားသည်။
“အေးငါလိုက်ခဲ့မယ်။ ငါလည်းအခွေမကြည့်ရတာကြာလို့ ကြည့်ချင်နေတာ အတော်ပဲ” ဒီလိုနဲ့ သူငယ်ချင်း အခွေဆိုင်က အောခွေတစ်ခွေ နဲ့ NC 17 နှစ်ခွေ ယူလာပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဒေါ်ရွှေနဲ့တခြားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို မေမေနဲ့အတူ ဧည့်ခန်းမှာထိုင်နေတာ တွေ့လိုက်ရသည်။ ဒေါ်ရွှေ့မျက်နှာလည်း မကောင်းသလို မေမေ့မျက်နှာသည်လည်း စိတ်ရှုပ်ဒေါသ ထွက်နေဟန်ရှိ၏။
ကျွန်တော်လည်း အခွေတွေကို ကျွန်တော့်အခန်းထဲတွင် ဖွက်ထားပြီးညကျမှ ကြည့်ရင်ပြင်ဆင်ထားရင်း ကျွန်တော်စိတ်တွေ အရမ်းစောပြီး ထိုင်မရ ထမရ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ခဏနား ရေမိုးချိုးပြီး ထမင်းစားရန်အောက်ထပ်ကို ဆင်းလာတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ငိုသံကိုကြားရ၏။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ မေမေ့ကို အရမ်းစိတ်ပူသွားမိသည်။ မေမေများငိုနေတာလား။မေမေတို့အခန်းမှလာသော ငိုသံ။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်မေမေတို့အခန်းနားကို ချဉ်းကပ်မိသည်။ မေမေ့စကားပြောသံကို ကြားနေရသည်။ ငိုသံသည် တခြား အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်၏။ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ထမင်းစားခန်းသို့ ဝင်လာခဲ့သည်။ မေမေကိုခေါ်မလို့လုပ်ပြီးမှ ဖေဖေပြန်မရောက်သေးတာသတိထားမိသည်။ မေမေသည် ဖေဖေမပါဘဲ ဘယ်တော့မှ ညစာ မစားတတ်။ ဖေဖေသည်လည်း ညတိုင်း အိမ်မှာထမင်းစားသည်။ ဧည့်ခံပွဲသွားစေဦးတော့ အိမ်မှာ ထမင်းစားဖို့ကို ဗိုက်ထဲမှာနေရာ နည်းနည်းချန်ထားသည်ဟု ဆိုလေ့ရှိသည်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းသာ ထမင်းစားနှင့်လိုက်သည်။ တစ်နေ့လုံးဘာမှ ဟုတ်တိပတ်တိ မစားထားသဖြင့် အလွန်စားလို့ကောင်းသည်။ ကျွန်တော်ဒုတိယမြောက် ထမင်းထ ထည့်စဉ် မေမေ နဲ့ ဒေါ်ရွှေ အိမ်ခန်းထဲမှာ ထွက်လာသည်။ဒေါ်ရွှေ့မျက်နှာသည် အလွန်အမင်းငိုထားဟန် ရှိ၏။
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမရယ် လို့လည်း မေမေ့ကိုပြောသံကြားရ၏။ မေမေကတော့ “ရွှေရွှေရယ် ကိုယ့်အမျိုးလိုသဘောထား၊ အေးအတူ ပူအမျှ ပေါ့ကွယ် ” လို့လေသံ ခပ်အေးအေးနဲ့ပြောနေပါသည်။
ဒေါ်ရွှေအိမ်ရှေ့အထွက်မှာပဲ ဖေဖေ့ကား ဝင်လာပါတော့တယ်။ “ဗိုက်ဆာတယ် ထမင်းခူး” ဆိုတဲ့ဖေဖေ့အသံကျယ်ကျယ်နဲ့အတူ လမ်းလျှောက်သံတဝုန်းဝုန်းကို လည်း ကြားရပါတော့သည်။ ကျွန်တော်လည်း စားလက်စ ထမင်းပန်းကန်ကို လက်က ကိုင်လျှက် နောက်ဖေးက ဖြိုးဖြိုး(အိမ်ဖော်ကောင်မလေး)တွေ နားမှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးသွားစားနေလိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော်ထမင်းစားပြီးတော့ ဖေဖေ နဲ့မေမေ ထမင်းစားခန်းမှာ ထမင်း စ စားနေကြလေပြီ။ “ဟိုကောင် ခင်အောင်လေ အိမ်ပေါင်ထားတယ် တဲ့” မေမေ ကဖေဖေ့ကို ဒေါ်ရွှေ့ယောက်ျားအကြောင်းပြော နေခြင်းပါ။ကျွန်တော်လည်း ဒေါ်ရွှေ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မယောင်မလည် နဲ့ ခိုးနားထောင်နေမိပါတော့သည်။
“အိမ်က ဆုံးတော့မှာမို့ ဈေးဖြတ်ပေးမယ်လို့ လာပြောနေတယ်၊ ညီမတို့ ဝယ်လိုက်မယ်လေ”
“ဘာလုပ်ဖို့တုန်း”ဖေဖေ့ရဲ့ တုံးတိတိ အသံ။
“ ရွှေရွှေနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ခမျာ သနားပါတယ်၊ နေစရာ မရှိရင်ပိုဆိုးသွားမှာပေါ့၊ ညီမအလုပ်က လည်း နေရာနည်းနည်းကျဉ်းလာပြီဆိုတော့ ရွှေရွှေတို့ဝိုင်းထဲရွေ့ ရွှေရွှေတို့ကို သူတို့အိမ်မှာပြန်ထားပြီး ရွှေရွှေကို ညီမ အလုပ်ထဲမှာ ကူခိုင်းမယ် စိတ်ကူးထားတယ်၊ သူက အားကိုးရတယ်၊ ရိုးသားတယ်လေ”
“ဈေးကတော့ နည်းနည်းများနေလို့ ကို နဲ့တိုင်ပင်တာ။ သုံးသိန်းခွဲတဲ့” (ထိုစဉ်က စူပါစလွန်း တစ်စီးမှ ငါးသိန်းခွဲ ခြောက်သိန်းသာ ရှိသည်။)
“အင်း။ကပ်လျှက်အိမ်ဆိုတော့ ယူတော့ထားသင့်ပါတယ်လေ။ မင်းအလုပ်ကို အဲ့ဘက်ဝိုင်းကိုအားလုံးပြောင်းပေါ့။သူတို့ကို ကူညီရာလည်းရောက်တာပေါ့။ စာချုပ်စာတန်း သေသေချာချာလုပ်ဖို့ ဦးဇော်(ရှေ့နေ) နဲ့ စီစဉ်လိုက်။ ကလေးတွေကိုလည်း ကျောင်းထားပေးလိုက်။ ကူညီမယ့်ကူညီအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ကူညီ။ခင်အောင်ကို အိမ်ထဲပေးမဝင်နဲ့။ ခင်အောင်ပြန်လာနေမယ်ဆိုရင် တခြားအိမ်ရှာလို့ မရွှေကို တခါတည်းအပြတ်ပြောထား” ဟု ဖေဖေက ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်း ထမင်းပန်းကန်ကိုတွန်းဖယ်လိုက်ပြီး သဘောင်္သီးပန်းကန်ကို အနီးသို့ရွှေ့လိုက်သည်။
“အဲဒါဆို ညီမရွှေရွှေကိုခေါ်လိုက်မယ် ။ ကို ပါဝိုင်းပြောလိုက်ရင်းကောင်းမယ်” မေမေ့အသံကိုနောက်မှာချန်ထားခဲ့ပြီး ထွက်လာခဲ့မိ၏။
ကျွန်တော်လည်း မိမိအိပ်ခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်။လေတဖြူးဖြူးတိုက်သော ဝရံတာတွင် ပလက်ကုလားထိုင်ချ ထိုင်ရင်း မေ့ကနဲ အိပ်ပျော်သွားမိသည်။အိပ်မက်ထဲတွင် လေတဖြူးဖြူးတိုက်နေသော နေရာတစ်ခုတွင် နှင်းသည် ကျွန်တော်ဆီသို့ နှုတ်ခမ်းလေး တဖက်တွန့်ပြုံးရင်းလျှောက်လာနေသည်။ဆံပင်တွေက လေတွင်ပျံကြဲနေ၏။ ထမီစကတ် ကိုဝတ်ထားရာ လေအဝှေ့မှာ စကပ်ကွဲကြောင်းက တဖျပ်ဖျပ် လွင့်နေ၍ ခြေသလုံးသား ဖြူဖြူလေးများကို မြင်နေရသည်။ တခါတရံတွင် ဒူးထိအောင်တက်သွားပြီး တခါတရံတွင်း ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကို မြင်ရတော့မတတ်။ နှင်းသည် ကျွန်တော်ရှေ့တွင် ရပ်လိုက်ပြီး အင်္ကျီကို ဆွဲချွတ်လိုက်ရာ ဒေါ်ရွှေ့ရဲ့ဖြူဖွေးကြီးမားလှသော နို့ကြီးနှစ်လုံး ထွက်ကျလာသည်။ ရေစက်ရေသီးလေးများပင် နို့ပေါ်မှာ တွဲခိုနေသေးသည်။ ကျွန်တော် နှင်းကို သေချာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ဒေါ်ရွှေဖြစ်သွားပြီး အပေါ်ပိုင်းတွင် အင်္ကျီမပါဘဲ ကြီးမားလုံးဝန်း ပြီးဖြူဖွေးနေသော နို့ကြီးနှစ်လုံးသည် တဆတ်ဆတ်တုန်လျက်။ ဒေါ်ရွှေသည် ကျွန်တော်ဆီသို့တိုးလာပြီး ကျွန်တော့်ကို တက်ဆောင့်ပါတော့သည်။ သုံးချက်လောက်ဆောင့် အပြီးမှာ ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီး အိပ်နေရာမှလည်းလန့်နိုးပါတော့သည်။ အပြင်မှာလည်း ကျွန်တော့်ပုဆိုးတွင် သုတ်ရည်များစိုရွဲနေပါတော့သည်။
ကျွန်တော် အရင်က မတွေ့ကြုံဖူးသေးသော အဖြစ်အပျက်ပါ.။အိပ်မက်ထဲမှာပင်ဖြစ်လင့်ကစား တော်တော်အရသာရှိလှပါသည်။ လူကော စိတ်ပါအလွန် လန်းဆန်းနေသလို ထင်ရပါသည်။ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိသည်က ကျွန်တော်သည် သူများနဲ့မတူ တမူထူးခြားနေပြီလား။ ကျွန်တော့်မှာလိင်နဲ့ ပတ်သက်သော ရောဂါ တစ်ခုခုများစွဲကပ်နေလေပြီလား။တကယ့်တကယ် မိန်းမအဖုတ်ထဲကို ထည့်ရလျှင်ယခုအရသာနဲ့ တူမည်လား။ ထိုအတွေးများထဲမှ မိမိကိုယ်ကို ရုန်းမထွက်နိုင်တော့ပါ။ ကျွန်တော့်အဖြစ်က ပြသနာတစ်ခုမှ မဖြေရှင်းရသေးခင် နောက်ထပ်ပြသနာ တစ်ခုကထပ်ရောက်လာသလိုဖြစ်နေလေပြီ။စိတ်တွေလည်း တော်တော်ကျဉ်းကျပ်နေလေပြီ။ လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဓါတ်လည်း ကျလာပြီး မိမိ ပစ္စည်းကို မိမိ စိတ်ပျက်လက်ပျက် နဲ့ကိုင်တွယ် ကြည့်ရှု နေမိသည်။
အတန်ကြာမှ မူလ အစီအစဉ်အတိုင်း အောကားကြည့်၍ ပန်းသေသည် မသေသည် ကို စမ်းစစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီး တီဗီရှိရာ အောက်ထပ်ဧည့်ခန်းသို့ ဆင်းလာခဲ့သည်။ ဧည့်ခန်းအတွင်းတွင် ဒေါ်ရွှေနှင့်ကလေးနှစ်ယောက် ၊ဖေဖေ၊မေမေ တို့ အစည်းအဝေးသည် မပြီးပြတ်သေး။ ကျွန်တော်သည် ဒေါ်ရွှေ့ကို ကောင်းကောင်းမျက်နှာချင်း မဆိုင်ရဲသော်လည်း သူ့ကိုဂရုစိုက်ကြောင်း ပြလိုသဖြင့် သားနှစ်ယောက်ကို လှမ်းခေါ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ချောကလက် တစ်ယောက်တစ်ခုစီ ပေးလိုက်ပါသည်။ အကြီးကောင် ကိုမင်းသည် ခြောက်တန်းဖြစ်ပြီး အငယ်ကောင်က ကိုရဲ(ကျွန်တော် နှင့်နာမည်တူ) သည် လေးတန်း ဖြစ်သည်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို ကျွန်တော့်အခန်းထဲခေါ်သွားပြီး ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ကစားသော အရုပ်မျိုးစုံ ထင်းရှူးသေတ္တာနဲ့ တစ်လုံးပေးလိုက်ပါသည်။ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်သည် အလွန်အမင်းပျော်မြူးသွားပြီး သေတ္တာကို မနိုင့်တနိုင်သယ်ဖို့ကြိုးစားကြသဖြင့် ကျွန်တော့်မှာ အတင်းတား ပြီး ကားသမား ကိုမြင့်ကြည် ကို လှမ်းခေါ်ပြီးအောက်ထပ် သို့ ချခိုင်းရပါသည်။
ဧည့်ခန်းအတွင်းသို အပြေးအလွှားဝင်သွားကြသော ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် ကို ဒေါ်ရွှေက ‘သားတို့ အရမ်းမဆော့ရဘူး ဟု ဟန့်လိုက်သည်။ အကြီးကောင်က “ကိုကြီးအနီကောင် က သားတို့ကို အရုပ်တွေ အများကြီးပေးတယ်။ သေတ္တာလိုက်ကြီးဗျ” သေတ္တာ မ လာသောကိုမြင့်ကြည်က “အနီကောင် ဘယ်နား ချရ မလဲ” ဟု ကျွန်တော့်အားမေးရာ “ဒေါ်ရွှေတို့ အိမ် ကို ပို့ပေးလိုက်ပါဗျ “ လို့ ကျွန်တော်လည်း ပြန်ပြောလိုက်ရာ မေမေက ဝင်၍ “သား ဒေါ်ရွှေ မှော်(ကျောက်တူးသောနေရာ) ထဲ အရေးတကြီးလိုက်သွားစရာ ရှိလို့ ကလေးနှစ်ယောက် ဒီအိမ်မှာပဲ နေခဲ့ရမယ် ဆိုတော့ ခုလောလောဆယ် အရုပ်သေတ္တာကို အောက်ထပ်မှာပဲ ထားလိုက်ဦး။ ကဲမြင့်ကြည် အရုပ်သေတ္တာထားပြီးရင် ရွှေရွှေအတွက် ကားလက်မှတ်ရနိုင်သေးသလားသွားကြည့်။”
ကိုမြင့်ကြည် ကုတ်ကုတ် ကုတ်ကုတ် နဲ့ ထွက်သွားပြီးနောက် ကျွန်တော်လည်း ခပ်တည်တည်နဲ့ ဧည့်ခန်းတွင်းမှာ ဝင်ထိုက်လိုက်သည်။ စိတ်ထဲမှာတော့ကြောက်နေသည်။ ဒေါ်ရွှေ့ကို ချောင်းထားလို့ မျက်နှာပူတာကော၊ အရေးကြီးတဲ့စကားများပြောလျှင် မောင်းထုတ်တတ်သော မိဘနှစ်ပါး၏ နှုတ်ကိုကော။ သို့သော် မေမေက ကျွန်တော့်ကို မောင်းမထုတ်ဘဲ“ကဲရွှေရွှေ ညည်းကိစ္စကို အခုဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းလုပ်နိုင်လျှင် လုပ်ပေတော့။ အဲဒါက ညည်းရော ကလေးနှစ်ယောက်လုံးအတွက်ပါ အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အစ်မတို့ယူဆတယ်။ ဒီအတိုင်းလုပ်မယ် ဆိုရင် ညည်းတို့ ခြံကိစ္စ အလုပ်အကိုင် စားရေးသောက်ရေး တွေ ငါတို့တာဝန်သာထား။” ဒေါ်ရွှေသည် နီရဲ အစ်ဖောင်းနေသော မျက်လုံးမှ မျက်ရည် တို့ကိုထိန်းရန် မျက်တောင်ကို အနည်းငယ်ခတ်လိုက်ရင်း အံ့ကြိတ်လျက် “ဟုတ်ကဲ့ပါ အစ်မရယ်၊ အစ်မတို့ ပြောတာတွေလည်း အရမ်းမှန်ပါတယ်။ အခုကူညီပေးနေတာတွေကိုလည်း ဘယ်လိုကျေးဇူးတောင် ဆပ်ရမှန်းမသိပါဘူး။ ရွှေ သားနှစ်ယောက်အတွက် ဘာပဲ လုပ်ရလုပ်ရပါ။ အစ်မတို့လည်း ရွှေတို့အတွက် နဲ့ စိတ်ရောလူရော ပင်ပန်းနေတာ အရမ်းအားနာပါတယ်။”
မေမေက ပြုံးလျက် “ကဲ ဒီညတော့ အိပ်တော့။ မနက်မှ စဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်တော့ ကားလက်မှတ်က ညနေမှဆိုတော့ အချိန်ရပါသေးတယ်၊ ငါတို့လည်း နားတော့မယ်။” ဆိုပြီးဒေါ်ရွှေ့ကို အိမ်ပေါက်ဝ ထိ လိုက်ပို့ကြပါသည်။ ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ ဒေါ်ရွှေ ပြန်သွားတော့မှ မေမေက “အစကတည်းက ဒီကောင် ဒီလောက်ဆိုးမှန်း မသိလို့” ဆိုပြီး ကိုခင်အောင်နဲ့ဒေါ်ရွှေ ကိစ္စကို ဇာတ်လှန်ပါတော့သည်။ ကိုခင်အောင်သည် မအောင်မြင်သော ကျောက်သမား မဟုတ်ပေ။ အတန်အသင့် အောင်မြင်ပြီး ဝင်ငွေလည်းကောင်းပေသည်။ သို့သော် အရက်၊ဖဲ နှင့်မခွဲနိုင်သဖြင့် မွဲပြီးရင်း မွဲ၏။ နောက်ဆုံး ခြံနှင့် အိမ်ကို ဒေါ်ရွှေမသိအောင် ပေါင်ပြီးသုံးပစ်သည်။ ဆုံးခါနီးမှ အပေါင်ခံတဲ့ အမျိုးသမီးက ဒေါ်ရွှေ အကြောင်းသိ၍ သနားပြီး လာပြောသည်။ ဈေးဖြတ်ပေးသည်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော့်မေမေက အိမ်နဲ့ဝိုင်းကို ဖြတ်ဝယ်ပြီး ဒေါ်ရွှေတို့ကို ဟန်မပျက်ထားမည်။ အိမ်နှစ်အိမ်ကြားထဲမှ အုတ်တံတိုင်းကို ဖျက်ကာ မေမေ့လုပ်ငန်းကို ဒေါ်ရွှေတို့ ခြံဘက်တွင် အခြေချမည်။ အချိန်အထိုက်အလျောက်အတွင်းမှာ ဒီလုပ်ငန်းကို ဒေါ်ရွှေ့ကို တာဝန်အားလုံးလွှဲပေးမည်။ မေမေက အခုအစပျိုးနေသော နောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကို အောင်မြင်အောင် စိတ်နစ်ပြီးလုပ်တော့မည်။ ဒေါ်ရွှေတို့ စားဝတ်နေရေး၊ ကလေးကျောင်းလခများကို တာဝန်ယူမည်။ ဒေါ်ရွှေလုပ်ငန်းကို နိုင်နိုင်နင်းနင်းလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်တွင် စုနိုင်ဆောင်းနိုင်မည့် ငွေပမာဏကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးမည်။
အားလုံး ဇာတ်လှန်ပြီးတော့မေမေက မောသွားဟန် နဲ့ “ကဲ ငါရေမိုးချိုးပြီး နားတော့မယ်၊ ဖေဖေတော့ ဘုရားရှစ်ခိုးနေလောက်ပြီ”ဆိုပြီး အိမ်ခန်းထဲဝင်သွားလေတော့သည်။ ကျွန်တော်လည်း မေမေတို့ အိပ်ချိန်လောက်မှ ဗီဒီယို ကြည့်မည်ဖြစ်၍ တီဗီမှလာနေသော အစီအစဉ်များကို စိတ်မပါလက်မပါ ထိုင်ကြည့်ရင်း အချိန်ဖြုန်းနေရပါသည်။ တီဗီကြည့်နေရင်းမှ ယနေ့ ဒေါ်ရွှေ ရေတစ်ခါသာ ချိုးကြောင်းကိုသွားသတိရ၍ ပြုံးမိပါသေးသည်။
ညအနည်းငယ် မိုးချုပ်မှ ကျွန်တော် NC17 တစ်ခွေကို အရင်ကြည့်ဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့် ညီလေးသည် ပုံမှန်လူတစ်ယောက်ကဲ့သို့ပင် ကြီးထွားသန်မာလာပြီး အကျောအပြိုင်းပြိုင်းထ ကာ နီရဲသော ဒစ်ကြီးပွင့်လျက် တစ်စုံတစ်ခုကို ငတ်မွှတ်တောင့်တ နေသကဲ့သို့ တဆတ်ဆတ်တငင်ငင် ဖြစ်နေပါသည်။ ကျွန်တော်ပန်းမသေ ဟုကိုယ့်ဘာသာ ကောက်ချက်ချပြီးဝမ်းသာခြင်းနှင့်အတူ ငတ်မွှတ်ဆာလောင်ကာ တစ်စုံတစ်ခုကို အားရပါးရ ဆောင့်ဆက်ပြီး တစ်ခုခု လုပ်ပလိုက်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် ဒေါ်ရွှေ့ကို အရင်ဆုံးသတိရသည်။ အိမ်ထဲမှ အများသုံး ရေချိုးခန်း အိမ်သာထဲ ဝင်လာခဲ့သည် အထိ ညီလေးသည် ကြီးမားရှည်လျားပြီး ဆာလောင်နေဆဲ။ ဒေါ်ရွှေ့ကို မှန်းပြီး ဂွင်းတိုက်မိ၏။ ပြီးခါနီးတွင်တော့ နောက်တစ်ယောက်ကို မတွေးဘဲနဲ့ သတိရမိ၏။ သူမ အမည်ကို အသံထွက်ရင်းပြီးသွားသည်.. နှင်းရေ............. နှင်းကျွန်တော် ကောင်မလေး တော်တော်များများကို စိတ်ဝင်စားခဲ့ဖူးပါသည်။ ချစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ နှင်း အတွက် ခံစားချက်သည် သူတို့ နဲ့ မတူပေ။ ထူးခြား၏။ နှင်းကို မြင်မြင်ချင်းရူးသွပ်သွားခြင်းမျိုး မဟုတ်။ သို့သော် နှင်း၏ အပြုအမူများ သည် မြင်မြင်ခြင်းကျွန်တော့် ရင်ထဲသို့ ဖောက်ထွင်းဝင်သွားဘိ ကဲ့သို့..။နောက်တစ်ခုက တခြား ကောင်မလေးများကို ချစ်ခင်စွဲလန်းခဲ့ဖူးသော်လည်း လိင်ကိစ္စ တို့တွင် စိတ်ကူး ခဲ့မိခြင်းမျိုးမရှိ၊ နှင်းကိုမူကား အလိုလျောက် စိတ်ကူးမိခြင်းဖြစ်ခဲ့ရလေပြီ။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် သုံးသပ်မိပြီ.။ ကျွန်တော် နှင်းကို ရ မှ ဖြစ်တော့မည်။ပိုင်ဆိုင်ချင် မိပြီ။
နောက်နေ့ မနက်စောစောတွင် ကျွန်တော်တို့ အိမ်တွင် အလုပ်ရုံ ရွှေ့ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်မှတပါး အိမ်ရှိလူကုန် အလုပ်ရှုပ်နေကြသည်။ ပန်းရံဆရာများကလည်း ဒေါ်ရွှေတို့ အိမ်နှင့် ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကြားမှာ အုတ်တံတိုင်းကို အလျှင်အမြန် ဖျက်ချပြီး အလုပ်ရုံ ရွှေ့ခြင်းကို ကူညီပေးသကဲ့သို့ ၊ အလုပ်ရုံ အသစ်အတွက် အုတ်ခဲများကို ပြန်သုံးလို့ ရအောင်လည်း ဂရုစိုက်ပြီး အုတ်တံတိုင်းကို ဖျက်ချနေကြသည်။ ကျွန်တော်သည် မနက်စာ ပဲပြုတ်ထမင်းကြော်စားပြီးနောက် ရေနွေးကြမ်းမတ်ခွက်ကို ကိုင်ရင်း အလုပ်ရုံရွေ့နေသော နေရာသို့ မယောင်မလည်နဲ့ ရောက်လာခဲ့သည်။ အုတ်တံတိုင်းကို တွန်းလှည်း တစ်စီးဝင်စာ ဖျက်ပြီးသွားပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ခြံဝိုင်းထဲမှ ဟောင်းနွမ်းနေသော အလုပ်ရုံရှိ ပစ္စည်းများကို တွန်းလှည်း များနှင့်တိုက်ခါ ဒေါ်ရွှေတို့ခြံ (ကျွန်တော်တို့ခေါင်းရင်းခြံ) ဘက်ကို ပြောင်းရွှေ့ ပုံထားကြသည်။ မေမေသည် ဖေဖေ့ပုဆိုးအဟောင်းကို ခေါင်းပေါင်းပြီး အသံတစာစာ နဲ့အလုပ်များနေချေပြီ။ ဒေါ်ရွှေသည်လည်း ထမီတိုတို ဝတ်ကာ ပန်းရံဆရာတစ်ဦးနဲ့ စကားပြောနေသည်။ စကားပြောနေရင်းမှ မေမေ့ကို လှမ်းခေါ်သည်။ မေမေကလည်း ကျွန်တော့်ကို လှမ်းခေါ်ချိန်မို့ ကျွန်တော်၊မေမေ၊ဒေါ်ရွှေ နှင့် ပန်းရံဆရာ တို့ သစ်ပင်ရိပ်တွင် မတ်တပ်ရပ်ကာ စကားပြောကြသည်။ မေမေက “ထမင်းကြော် စားပြီးပလား သား” ဆိုတော့ ခေါင်းငြိတ်ပြလိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ စကားမပြောပါ။ ရေနွေးသောက်ရင်း သူတို့ပြောတာသာ နားထောင်နေပါသည်။ဒေါ်ရွှေက အုတ်တံတိုင်း တခြမ်းကို မဖျက်ဘဲချန်ထားပြီး ဘေးမှ ကျောက်ထုတ်ပိုးကာ L ပုံစံ အုတ်တံတိုင်း ဒေါင့်ကွေးကို အလုပ်ရုံအတွက် နံရံနှစ်ဖက် အဖြစ် အနည်းငယ်မွန်းမံပြီး အသုံးပြုလျှင် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပန်းရန်ဆရာ နဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး မေမေ့ကို ပြောပါသည်။ မေမေက အလုပ်ရုံကို သိပ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မလုပ်လိုဘဲ အရင်ကအတိုင်း အဖြစ်သာသာ ဘဲ လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားသည်။ ဒေါ်ရွှေက အစီအစဉ်နှစ်ခုလုံးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို ပါးစပ်နဲ့ အကြမ်းဖျင်း တွက်ပြနေသည်။ ငွေအများကြီး မကွာကြောင်းလည်း မေမေ့ကို ပြောနေသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒေါ်ရွှေပြောသည်များကို နားမလည်တစ်ချက် နားလည်တစ်ချက် နဲ့ သူ့မျက်နှာကိုသာ ငေးကြည့်နေမိသည်။ မေမေ လူရွေး မှန်သည် ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။
ကျွန်တော် အိမ်မှ ထွက်လာပြီးတော့ စာအုပ်ဆိုင်မှ ကိုအောင်ကိုခေါ်ပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖြစ်သည်။ ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း ပြောနေရင်းမှ ကိုအောင်က တစ်စုံတစ်ခုကို သတိရဟန် နဲ့ အလန့်တကြား “ကိုရဲ မင်းကို ကောင်မလေးတစ်ယောက် လာမေးတယ်ကွ”
ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ တကယ်ကို ထူးဆန်းတာပါ.။ ကျွန်တော့် ရုပ်ရည် နဲ့ အရည်အချင်း အရ မည်သည့် မိန်းကလေးကမှ စ တင် စိတ်ဝင်စားတာမျိုး မရှိခဲ့ဖူးပါ။ ကျွန်တော့်အိမ်က တော့ သာမာန် လူလတ်တန်းစား ထက် အနည်းငယ် ပို၍ချမ်းသာပါသည်။ ထိုအချက်က အမျိုးသမီးများက ကျွန်တော့်ကို စိတ်ဝင်စားစေသော အချက်လို့ ကျွန်တော်မယုံကြည်ပါ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်သည် တစ်ဦးတည်းသော သား ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံရေး မကောင်းပါ။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေ ရှေ့မှာပေါ့.။ ထို့ထက် အသေးစိတ်ရလျှင် ခပ်ချောချောအမျိုးသမီးများရှေ့မှာပေါ့..။
“ဘယ်လို ပုံ မျိုးလဲဗျ “
“အသားဖြူဖြူ ခပ်ချောချောပဲကွ၊ မိုက်တော့ မိုက်တယ် ။မင်းထက်အသက်ကြီးမယ်ထင်တယ်။ငါကဘာကိစ္စရှိလဲ ငါ့ပြောထားခဲ့ ဆိုတော့ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး လို့ပြောတယ်။ မင်းနဲ့ အရင်က သိတယ်တဲ့။”
“ကျွန်တော်ထက်ကြီးတဲ့ ချောချော အမျိုးသမီး ဆိုတာ…။ မစဉ်းစားတတ်ပါဘူး ကိုဇော်ကြီး ရယ်”
“ငါ့ဆိုင်မှာ စာအုပ်လာငှားတာ မကြာသေးဘူး။ ညနေပိုင်းဆို လာတတ်တယ်။”
“အင်း.ကျွန်တော် ညနေတော့ မတွေ့မိပါ့လား။”
“တွေ့ဖူးတယ် ထင်တယ်ကွ။ မင်းနဲ့ ငါက အာလူးဖုတ်တာ များနေလို့ ။သူ့အဒေါ်က ---လူမျိုးလေကွာ။မိတ်ကပ်တွေ လိမ်းလိမ်း ထားတတ်တယ်လေ။”
“ကျွန်တော် မြင်ရင်တော့ သိမယ် ထင်ပါတယ်။ကိုဇော်ကြီး နာမည် သိသလား”
“ဟေ့အေး။ သူ့အဒေါ်ယောက်ျားက ---ရုံးကလေ။ အဲ့လူနာမည်နဲ့ငှားနေတာပဲ”
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ နှင်းများ ဖြစ်နေမလား လို့ တောင့်တ နေမိပါသည်။ညနေ ရင်ခုန်စရာ ကောင်းမယ် ညနေ။ ညနေ ရေ မြန်မြန် လာပါတော့.။ ညနေ။
အလွန်လှပသော ရွှေရောင်လူးထားတဲ့ ညနေ။ ညနေ၏ အလှသည် ရင်ခုန်ရစ်မူးဖွယ်..။ ဤမျှလှပသော ညနေပေါင်းများစွာကို ကျွန်တော်ဘာကြောင့် လျစ်လျူရှုပြီးဖြတ်သန်းခဲ့ပါသနည်း ဟုနှမြောတသစွာ တွေးမိ၏။ ဒီညနေတွင် ဒေါ်ရွှေ မှော်ထဲဆင်းမည်။ ဒီညနေတွင် ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါမှန်းမသိသော ကောင်မလေး ချောချောလေးကို ရင်ခုန်လှိုက်မောဖွယ် တွေ့ဆုံရမည်။ လောကကြီးသည် သာယာလှပလွန်းစွ။ ဆံပင်ကိုကော့နေအောင်ဖီး၊ ရေမွှေးနည်းနည်း ဆွတ်ပြီး လမ်းထိပ်က ကိုအောင့် စာအုပ်ဆိုင်ကို စိတ်လောစွာ ထွက်လာခဲ့မိပါသည်။နည်းနည်း စောစော ထွက်လာမိသဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ရှက်သဖြင့် ကွမ်းယာဆိုင်ဝင်ကာ အချိန်ဖြုန်း နေမိသဖြင့် စာအုပ်ဆိုင်ကို ရောက်နေကျ အချိန်ထက် နာရီဝက်လောက် နောက်ကျပြီးမှ ရောက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် စာအုပ်ဆိုင်ရောက်ရောက်ချင်း ကိုအောင်က “မင်းကောင်မလေး ခုနပဲ လာသွားတယ်” ဟု ဆီးပြောပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားမရခြင်းများနဲ့ အတူစိတ်အားငယ်သွားမိပါသည်။ “ကျွန်တော့်ကောင်မလေး ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကိုအောင်ကြီး ကလဲ” ဟုကျွန်တော် ပြောပြောဆိုဆို နှင့် ဆိုင်အပေါက်ကို ကျောပေးထားသော ကိုအောင် နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် ခုံတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်ချိန်ဝယ်ကိုအောင်က “အဲ….။ကိုရဲ” ဆိုပြီး မျက်လုံးကြီးပြူးပြီး ဆိုင်ပေါက်ဝ ကို ကြည့်နေသည်။ ကျွန်တော်လည်း သမင်လည်ပြန် လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ..
ရုတ်တရက် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ငြိမ်သက်သွားပြီး ကျွန်တော့တကိုယ်လုံးလည်း အေးခဲသွားသည် ဟုထင်မိ၏။ ကျွန်တော့်နားထဲတွင် ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံမှ တပါး....တခြားအသံများကို မကြားတော့။ ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံသည် ဘူတာမှ ထွက်ခွာလာသော မီးရထားအရှိန်မြှင့်သကဲ့သို့ ….။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်ခုန်သံနတ်သမီးလေး နှင်း ပါ..။မမနှင်းပေါ့.။ နှင်းက လျှော်ပြီးစ ဆံပင်ကျောလည်လောက်ကို ဖြန့်ချထားသည်။ စပို့ရှပ် အင်္ကျီ အဝါလေးကို အပေါ်ကြယ်သီးတစ်လုံး ဖြုတ်ဝတ်ထားသည်။ ဖြူဖြူဝင်းဝင်း ရင်ဘက်အသားလေးများကို ရွှေဆွဲကြိုးလေးက အလှဆင်ထားသည်။ မို့မို့မောက်မောက် ရင်သား များက အင်္ကျီနဲ့ ချပ်ရပ်ပြီး ကြွားကြွားဝင့်ဝင့် ငှားငှားစွင့်စွင့် ပေါ့။ ထမီစကတ် အညိုရောင် ပြောင် ကို ဝတ်ထားသဖြင့် ပေါင်တံစင်းစင်းလေးတွေက အတိုင်းသား။ ဆိုင်ထဲအဝင် လေအတိုက်မှာ မျက်နှာပေါ် ဝဲကျလာသော ဆံပင်များကို သိမ်မွေ့စွာ ခေါင်းဆတ်တင်လိုက်ရင်း ဆိုင်ထဲသို့ တစ်လှမ်းချင်း အေးဆေးစွာ ဝင်လာပုံသည် ခန်းနားထည်ဝါ လွန်းလှသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်မိသလို..ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော်လည်း သိမ်ငယ် ကျုံ့ဝင်သွားသလို ခံစားရပါသည်။ အကျောစိမ်းလေးတွေ ယှက်နွယ်နေသော ဖြူဖွေးဝင်းအိသည့် ခြေထောက် ဖြူဖြူလေးများ ကို ကတ္တီပါ လေးညှင်းရောင် ဖိနပ်ကလေးက နောက်ခံပေးထားလေရဲ့.။ကျွန်တော်ထိုင်နေသော ခုံနံဘေးမှ လန်းဆန်းတက်ကြွဖွယ် Body Spray နဲ့အတူ နှင်းဖြတ်သွားတော့ ကျွန်တော့ ညာဘက်ခြမ်းကို လေဟပ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်ခေါင်းငုံ့ထားဆဲ။
“အစ်ကို ကျွန်မ ဒီစာအုပ်လေးခုမှငှားသွားတာ၊ လဲ ချင်လို့ ပေးလဲမလား” ရွှေခေါင်းလောင်း လေးရဲ့မြည်သံက ရင်တစ်ခုလုံးကို ဆုပ်ကိုင်နင်းခြေ လိုက်သလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်ဟာ မြှားမကုန်ပေမယ့် စစ်မရောက်ခင်ကတည်းက လက်နက်ချသူပါ..။
“ရတယ် ညီမ” ဆိုတဲ့ ကိုအောင့် အသံတောင် ကျွန်တော့်နားထဲမှာ ကွဲအက်နေသလိုလို..။
ကျွန်တော့် တကိုယ်လုံးက အေးခဲ နေပြီး ဘီလူးစီးခံရသူတစ်ယောက်လိုမျိုး လှုပ်လို့ မရနိုင်လောက်အောင် အချစ်နတ်က ဖမ်းစားထားတယ်။ ကိုအောင်က စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဟိုလှန် ဒီလှန်လုပ်နေတယ်။ နှင်းက စာအုပ်တွေ ရှိသော ကျွန်တော့်နောက်ကျောဖက်မှာ စာအုပ်တွေရွေးနေကြောင်း အသံအရ သိရသည်။
ခဏအကြာမှာ တိုးတိတ်တဲ့ သစ်ရွက်ရွေ့သံလို ခြေသံမျိုးနဲ့ ကိုအောင့် ကောင်တာ ဆီသို့ နှင်းပြန်လာတယ်။ ကျွန်တော်မော့်မကြည့်ဖြစ်.။ နှင်းက
“ဒီစာအုပ် ညီမယူသွားမယ် အစ်ကို။ အစ်ကိုဖတ်ပြီးပြီလား..။ ကောင်းလား” ဆိုပြီး မေးခွန်းတွေ ဆက်တိုက်မေးပါတယ်။
“အင်းဖတ်ပြီးပြီ.ညီမ။ မဆိုးပါဘူး ကောင်းပါတယ်။ လူငယ်ကြိုက်ပေါ့။ အော် ဒါနဲ့ ကိုရဲ နဲ့ ညီမနဲ့က သိကြတယ် မလား”
“ဟင့်အင်း မသိဘူး” ကျွန်တော့်ရဲ့ အက်ကွဲအေးစက် ကျယ်လောင်လှတဲ့ အသံကြီး။ကိုယ့်နားကို ကိုယ် မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ..။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က ထွက်သွားခဲ့တယ်။
၁ >>ကိုအောင့်မျက်နှာကြီး ရဲတက်သွားတယ်။
၂>> နှင်းက လက်လှလှလေးတွေ နဲ့ စာအုပ်ကိုကောက်ယူပြီး ခဏ ငြိမ်သက်နေတယ်။
၃>>ကျွန်တော် က နှင်းကို မော့ကြည့်မိတယ်။ နှင်းက နှုတ်ခမ်းလေး တွန့်ခနဲနေအောင် ပြုံးပြပြီး ဆံပင်တွေ ဝဲကနဲ ဖြစ်သွားအောင် ကိုယ်ကို လှည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာတော့ ကျင်ခနဲ…..
နှင်းထွက်သွားတော့....ကိုအောင် နဲ့ ကျွန်တော် တို့နှစ်ယောက် အေးခဲပြီးကျန်ခဲ့တယ်.။ ဒီလိုနဲ့ လှပတဲ့ညနေလေး မလှမပဖြစ်ခဲ့ရတယ်..။
ကျွန်တော် ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းကိုယ် ကိုက်ရင်း ခေါင်းငုံ့ နေခဲ့တယ်..။ ကျွန်တော့် ရင်ဘက်ကို ကျွန်တော်ပြန်တွေ့တယ်.ရင်ခွင်တစ်ခုလုံး အချစ်ပျိုးတွေ ကြဲပြီးပြီ နှင်းရေ... အဖြစ်ပျက်တွေအားလုံးအပြီးမှာ ကျွန်တော့် စိတ်တွေ နောက်ကျိလေးလံသွားတယ်၊ ခြေတွေလက်တွေ မသယ်ချင်အောင်ဖြစ်နေသည်။ နှစ်ရက်ရှိပြီ ကျွန်တော် အိမ်တွင်းအောင်း နေခဲ့သည်။ အိပ်ခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း။ အမှောင်က ကြီးစိုးလာလေ အထီးကျန်စိတ်တွေလွှမ်းမိုးပြီး အားငယ်လာလေ.။အကြိုက်ဆုံး စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ ဝတ္တုတစ်အုပ်ကို ဖတ်ကြည့်တယ်..။ စာမျက်နှာ တစ်ရွက်မပြီးခင်မှာပဲ “မသိဘူး” ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်အသံက ကျွန်တော့်ကို ပြန်လည် ခြောက်လှန့်နေပါတော့သည်။ နားကကြားနေတာ မဟုတ်တော့ နားပိတ်ထားလို့လည်း မရ.။ ကျွန်တော့်ခန္တာကိုယ်တစ်နေရာက မြည်းဟည်းနေတဲ့ အသံ။ ကျွန်တော် ဘယ်လိုတားတား ကြားနေရတယ်။ကျွန်တော်ရူးသွားမတတ် ပူလောင်လာတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို မခံစားနိုင်တော့တဲ့ နောက်ဆုံး ညကိုးနာရီလောက်မှာ ကျွန်တော်အိမ်ကနေ ခိုးထွက်လာခဲ့တယ်။ ဘယ်သွားရမယ်မှန်း မသိ။ ခြေလှမ်းများက သွားနေကျ ကိုအောင့်စာအုပ်ဆိုင် ကို ခေါ်ဆောင်သွားသည့်နောက် ကျွန်တော်လိုက်လာခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်က ကိုယ့်ခြေလှမ်းကိုတောင် ကိုယ့်ဘာသာ မလှမ်းနိုင်တဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ ငနုံတစ်ကောင်ဆိုတာကို နာနာကျည်းကျည်းပြုံးရင်း တွေးမိတယ်။ ဆိုင်သိမ်းနေတဲ့ ကိုအောင်က ကျွန်တော့်ကို အံ့သြတကြီး ကြည့်နေတယ်။
“ကိုအောင်ကြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင် သွားရအောင်ဗျာ”
“ဟေ့ကောင် ငါက ဘီယာဆိုင်သွားထိုင်မလို့ကွ”
“ကိုရဲ မင်း စိတ်ညစ်နေတာငါနားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါကတော့ မင်းဘဝမှာ အရက် စတိုက်တဲ့ လူ မဖြစ်ချင်တာ အမှန်ပဲ ငါ့ညီ”
“ကျွန်တော် မသောက်ပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပါရစေ။ တစ်ယောက်တည်း မနေနိုင်လို့ ၊အထီးကျန် လွန်းလို့ပါဗျာ”
“လိုက်လည်း မလိုက်ခဲ့နဲ့ ။သောက်လည်း မသောက်နဲ့ ငါ့လူ” ပြောပြောဆိုဆို ကိုအောင် ဆိုင်ကယ်တက်ခွပြီး မောင်းထွက်သွားသည်။ ကျွန်တော့်မှာ ဆိုင်ကယ်လည်း မရှိ။ ဘာမှ လည်း မပါ မို့တစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့သည်။တစ်ယောက်တည်း မနေချင်တာနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက မိုးအလင်း ကွမ်းယာဆိုင်တွင် ကွမ်းစားပြီး ထိုင်နေစဉ် ---ဘီယာဆိုင်က စားပွဲထိုးလေးက ကိုအောင့်ဆိုင်ကယ် နဲ့ ကွမ်းလာဝယ်သည်။ ကျွန်တော်လည်း ခပ်တည်တည် နဲ့ စားပွဲထိုးလေးနဲ့ လိုက်လာခဲ့သည်။
ဘီယာဆိုင် ရောက်ရောက်ချင်း တစ်ယောက်တည်းထိုင်ကာ ကျွန်တော့်ကိုလှမ်းကြည့်နေသော ကိုအောင့်ဆီမသွားဘဲ ခုန စားပွဲထိုးလေးကို ဘီယာ တစ်လုံးဘယ်လောက်လဲ ဟု မေးပြီး အိပ်ထဲမှ ပိုက်ဆံထုတ်ပေးလိုက်သည်။ကောင်လေး ပုလင်းလာပေးတော့ ဖောက်ခိုင်းပြီး မတ်တပ်ရပ်လျှက် အနည်းငယ်သောက်လိုက်ပြီး ကိုအောင့်ဝိုင်းသို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။ ကိုအောင်က
“"မင်း နှင်းနဲ့ ကိစ္စမှာ အဲလိုပါးပါးနပ်နပ် လုပ်ရင် အခုဆို အိုကေ နေလောက်ပြီ။မင်း ငတုံး၊ အရူး ငါဘာဆက်ပြောရဦးမလဲ"”
ကျွန်တော် ကိုအောင်ဆဲတာ ခံပြီးတော့ တော်တော်သက်သာရာ ရသွားသည်။
“"ဟုတ်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်ဘာလို့ အဲလိုလုပ်လိုက်မှန်း ကျွန်တော့်ဘာသာလည်း မသိဘူး"”
“အေး ခုလောလောဆယ် မင်းထပ်သောက်လိုက်ဦး။ ငါလည်း ထပ်သောက်လိုက်ဦးမယ်။ ပြီးမှ စကားပြောကြမယ်။ မင်းဘာလို့ မြန်မာဘီယာ မှာတာလဲ။ မန္တလေးဘီယာကမှ ကောင်းတာကွ။”
(ထိုခေတ်က မန္တလေးဘီယာသည် မြန်မာဘီယာထက် အလွန်အမင်းသာလွန်ပါသည်။ ဤကား စကားချပ်)
“"ကျွန်တော်သိမှ မသိတာဗျာ"” ကျွန်တော်က အိပ်ကပ်ထဲမှာ ပါသမျှ ပိုက်ဆံကို ထုတ်လိုက်ပြီး
“"တစ်မျိုးတော့မထင်နဲ့ဗျာ ကိုအောင်ကြီး ကျွန်တော်မှာလည်း မမှာတတ်ဘူး။ ဘာစားရမှန်းလည်း မသိဘူး။ ဒါကျွန်တော့်မှာ ပါတာ အကုန်ပဲ။
လိုရင်ကိုအောင်ကြီး ခဏစိုက်ထားဗျာ။ ဒီနေ့ကျွန်တော် အရက် စသောက်တဲ့နေ့အဖြစ် ကျွန်တော် ဒကာ ခံပါ့မယ်"”
ကိုအောင်က ပြုံးပြီးခေါင်းညိတ်ပြရင်း စားပွဲထိုးကောင်လေးတစ်ယောက် ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါသည်။ “ညီလေး အစ်ကို ခုန မှာထားတဲ့ မှိုကန်စွန်း ရပြီလား။ ကြက်ဥမွှေကြော် တစ်ပွဲ ၊ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ်၊ ခွေးတောက်ရွက် နဲ့ ကြက်ရိုးဟင်းချို လေး ထပ်လုပ်ကွာ”
ကျွန်တော် ဘီယာတစ်လုံး ကုန်ပြီးနောက် အတော်အသင့် ရီဝေဝေ ဖြစ်လာပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုများပိုလာသလို သတ္တိများရှိလာသလို ခံစားရသည်။
ထိုအချိန်တွင် ကိုအောင်က “ အင်းပြောစမ်းပါဦး မင်း နဲ့ နှင်း အကြောင်း”
“"ဘာမှ မရှိပါဘူး ကျွန်တော်က သူ့ကို ကြိုက်တယ်ဗျာ..။ သူ့ရှေ့ရောက်ရင် သောက်တလွဲတွေ လုပ်တယ် ဗျာ။ ဒါပါဘဲ” " ပြောရင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် နာကျည်းလာသလို ခံစားရသဖြင့် ဘီယာခွက် တစ်ဝက်လောက်ကို တစ်ခါ တည်း နဲ့ သောက်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ခွေးတောက်ရွက် နှင့် ကြက်ရိုးချက်ရောထားသော ဟင်းချိုကို မုန့်ကြွပ်ဖတ် ကလေးများပါအောင် ခပ်ကာ နှစ်ဇွန်းခန့်သောက်လိုက်သည်။
ကျွန်တော်စားတာကို စောင့်ကြည့်နေသော ကိုအောင်သည် ကျွန်တော်ဇွန်းချချ ခြင်းပင်
“ ခုလောလောဆယ်တော့ ကောင်မလေးက အတော်ရှက်သွားလောက်ပြီ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အရှက်ရသွားရင် အချစ်ရေးအတွက်ကတော့ တော်တော်မလွယ် ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ကွ”
ကိုအောင် စကားကြောင့် ကျွန်တော် ငိုင်သွားသည်။ နှင်း ရေ တကယ်ပဲ တံတိုင်းခြားသွားပြီလား..။သို့သော် အချစ် နဲ့ အရက် ပေါင်းပြီး သွေးဆူ နေသောကျွန်တော်က
“"ကျွန်တော် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားမယ် ဗျာ၊ ကိုအောင်ကြီးလည်း ကျွန်တော့်ကို ကူညီပါဗျာ။"
ကိုအောင်က ပြုံးသည်။ မိန့်မိန့်ကြီးပေါ့..။
ဘီယာဆိုင်က ပြန်လာတော့ ၁၁ နာရီလောက်ရှိပြီ။ အဲဒီမှာ ပြသနာတစ်ခုက မထင်မှတ်ဘဲ ဝင်လာခဲ့သည်။ကျွန်တော်အိမ်က အတွက်မှာ နောက်ဖေးက တံခါးကို အသာလေး စိထားခဲ့သည်။ မေမေတို့က သူတို့အခန်းထဲဝင်ပြီးသွားလျှင် တော်ရုံ ပြန်မထွက်တော့တာ သိသဖြင့်စိတ်ချနေခဲ့သည်။အခု ပြန်လာတော့ တံခါးက အထဲက lock ချပြီး ပိတ်ထားသည်။ဒါနဲ့ ကားဂိုဒေါင်ဘက် ထွက်လာခဲ့သည်။ ဂိုဒေါင်ဘက်တွင် လူရိပ်လူခြေမတွေ့တော့။ အားလုံးဒီရက်ပိုင်း အလုပ်ရုံအပြောင်းအရွေ့နဲ့ ပင်ပန်းသဖြင့် အိပ်နေလောက်ပြီ။ ဒေါ်ရွှေတို့ ခြံဘက်ကမီးရောင် မြင်သဖြင့် မေမေတို့အခန်းကို ရှောင် ကွေ့ပြီး ဝင်လာခဲ့သည်။ ဒေါ်ရွှေတို့ ခြံဘက်ကို မေမေတို့အခန်းမှ မမြင်ရ။ တံတိုင်း တစ်ဖက် ခံနေသောကြောင့်..။ ကားဂိုဒေါင်ပေါ်မှာနေသော ကိုမြင့်ကြည်အခန်း ပြတင်းပေါက်မှသာ မြင်နိုင်သည်။ ကိုမြင့်ကြည်သည် ခုချိန်ဆို သိုးနေအောင် အိပ်လောက်ပြီ။
ဒေါ်ရွှေတို့ အ်ိမ်ရောက်တော့ တံခါးမကြီးကို ဖွင့်ကြည့်ရာ ပိတ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း အိမ်ထဲမှ မီးရောင် မြင်နေရသဖြင့် မီးရောင်လာရာ တိုက်ခေါင်းရင်းဘက်နှင့် အုတ်တံတိုင်းကြား ကို လာခဲ့သည်။ ဒေါ်ရွှေ့အိမ်သည် တစ်ထပ်တိုက်လေးဖြစ်ပြီး တရုတ်ကပ်မှန်များ တပ်ထားသည်။ ခေါင်းရင်း ဒေါ်ရွှေတို့ အိပ်ခန်းထဲတွင် မီးလင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် တရုတ်ကပ်မှန်ကြားမှ လှမ်းကြည့်တော့ ကလေးနှစ်ယောက်သည် ဒေါ်ရွှေနဲ့အတူ မီးကြီးဖွင့်ပြီး အိပ်ပျော်နေပြီဖြစ်သည်။ကျွန်တော်လည်း အံ့သြသွားသည်။ ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အထိ ဒေါ်ရွှေ ပြန်မရောက်သေး။ဖြစ်နိုင်တာက ဒေါ်ရွှေ ပြန်ရောက် လာပြီး မေမေတို့ကို သွားတွေ့ပါလိမ့်မည်။ ထိုအခိုက် ကျွန်တော်စိ ထားခဲ့သော တံခါးကိုပါ ပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။ ဒေါ်ရွှေလည်း ခရီးပန်းလာလို့လား မသိ အိပ်နေတာ ဟောက်သံတောင် ကြားနေရသည်။ ကျွန်တော်လည်း အားနာတာ နဲ့ အသံမပြု ချင်တော့။ အမူးလည်းပြေပြီ။ အိပ်စရာလည်း နေရာ မရှိ။ ခြင်ကလည်း ကိုက်သည်။
ကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေတုန်း အိပ်ပျော်နေသော ဒေါ်ရွှေသည် ခြင်လုံဇကာကြီးရှိနေပါလျက် ခြင်ကိုက်၍ လားမသိ ပေါင်ကို လက်နဲ့ ရိုက်ပြီး တဖြင်းဖြင်း ကုတ်နေသည်။ကုတ်နေရင်းမှ အားမရဟန်ဖြင့် ဒူးတစ်ဖက်ကိုထောင်ပြီးကုတ်ရာ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ပေါင်လုံးကြီးများက ခပ်ရွေရွေလေး ပေါ်လာသည်။ ဒေါ်ရွှေသည် နက်ပြာရောင် ရေလဲ ထမီကိုပင် ဝတ်ထားရာ သူမ၏ နကိုယ်ဖြူသော အသားကို ပိုမိုပံ့ပိုးပေးနေသကဲ့သို့..။ အိပ်ချင်စိတ်များ ကျွန်တော့် ကိုယ်မှ ထွက်ပြေးသွားပြီး တဏှာရာဂ စိတ်များ ပူးကပ်လာသည်။ ချက်ခြင်း ကျွန်တော့် နားရွက်များ ပူထူသွားပြီး လက်ကလည်း ညီလေးကို ကိုင်မိသည်။ ထုံးစံအတိုင်းညီလေးက သေးငယ်ကျစ်လစ် နေသည်။ မထင်မှတ်ပဲနဲ့ ဒေါ်ရွှေ အိပ်နေသည်ကို အိမ်တိုင်ရာရောက် လာချောင်းမိပြီ။ မထူးတော့ပြီမို့ ဆက်ချောင်းမိသည်။ ဒေါ်ရွှေသည် ထောင်နေသော ဒူးကို ချပြီး ပက်လက် အနေအထားပြန်အိပ်သွားသည်။ ခြေရင်းမှာ ဖွင့်ထားသော ပန်ကာက ဒေါ်ရွှေ့ဘက်ကို လေတိုက်လိုက်တိုင်း မီးရောင်အောက်တွင် ဖြူဝင်းနေသော ခြေသလုံးသားများပေါ်မှာ နက်ပြာရောင် ထမီသည် အောက်စ လွတ်တော့မည်ကဲ့သို့ လှုပ်ခနဲ လှုပ်ခနဲ။ ကျွန်တော်ကြည့်နေစဉ်မှာ ဒေါ်ရွှေက အိုက်စက်ဟန်ဖြင့် ထမီထဲ လေဝင်စေရန် ထမီကို ဒူးလောက်မှ ကိုင်ကာ နှစ်ချက် သုံးချက်ခါပြီး လေသွင်းလိုက်သည်။ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး တစ်တစ်ရစ်ရစ် နဲ့ အိစက်ဟန် ရှိသော ပေါင်လုံး များကို လျှပ်စီးလျှပ်သကဲ့သို့ ဖွေးခနဲ ဖွေးခနဲ မြင်လိုက်ရသည်။ ကျွန်တော် အလွန် စိတ်ပါ လာသည်။ ဂွင်းတိုက်သော်လည်း မပြီးနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေသည်။
အတန်ကြာသည်အထိ မထူခြား။ခဏနေတော့ ဒေါ်ရွှေက မလှုပ် အငယ်ကောင် ကိုရဲက လှုပ်သည်။ ကိုရဲက ယားဟန် နဲ့ ခြေထောက်ကို အိပ်ယာနဲ့ အကြိမ်များစွာ အပေါ်အောက်ပွတ်ပါသည်။ တစ်ကြိမ်တွင်တော့ ဒေါ်ရွှေ့ထမီကို အပေါ်မှ အောက်သို့ ကန်၍ဆွဲချလိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်သွားပါသည်။ ဒေါ်ရွှေထမီသည် ပြေလျော့ပြီး အောက်သို့ လျောကျသွားပါသည်။ ဖြူဖြူ ဖွေးဖွေး အိအိစက်စက် နဲ့ အလွန်ပွတ်ကြည့်ချင်စရာ ကောင်းလှသော ဗိုက်သား များသည် အင်္ကျီ ခါးတို နှင့် ထမီကြားမှာ ရင်ခုန်ဖွယ်ကောင်းလေစွ။ထမီ အပေါ်စ သည် ညာဘက်ဘေးအောက်သို့ စွေစွေ လေးကျနေသဖြင့် တင်ပါးဘေးတစ်ခြမ်း နဲ့ ပေါင်ခြံနေရာလောက်ထိ မြင်နေရပါသည်။ ကျွန်တော်သည် တတ်နိုင်သမျှ ကိုယ်ကို ရှေ့တိုး၍ အားစိုက်ကြည့်သည်။တရုတ်ကတ် မှန်ကို ပိုလှန်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်ဒေါ်ရွှေ့ကို ပိုမိုသဲကွဲစွာမြင်ရလေပြီ။သေချာကြည့်မှ ဗိုက်သားဖြူဖြူနဲ့တဆက်တည်း ဆီးခုံကိုပါ မြင်ရသည်။ ဆီးခုံသည်အနည်းငယ် ညိုသယောင်ရှိသော်လည်း အကျောစိမ်းလေးများကို မြင်နေရဆဲ။ ဆီးခုံ နဲ့ အထက်ဆင်အစပ်နားတွင်မူ စောက်ဖုတ်မွှေးမည်းမည်းတစ်ချို့သည် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဆီးခုံပေါ်တွင် ကလှူသလိုလို မြှူသလိုလို ထွက်နေသည်။အထက်ဆင်အောက်နားတွင် ထမီပါးပါးလေးအောက်မှ စောက်ဖုတ်သည် ဖောင်းကားပြီး သိသိသာသာ မို့မောက်နေပါသည်။ကျွန်တော်သည် ဒေါ်ရွှေ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို လက်ကလေးနဲ့ အုပ်ပြီး ကိုင်ကြည့်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား။ ဒီလိုနဲ့ ဒေါ်ရွှေ ဗိုက်ဖြူဖြူကြီးကိုကြည့်လိုက်၊ ဆီးခုံညိုညို နဲ့ အဖုတ်မွှေးလေးတွေကိုကြည့်လိုက်၊ ထမီအောက်က အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို မှန်းလိုက်ဖြင့် ဂွင်းတိုက်ရာ ခဏ အတွင်းပြီးသွားသည်။ ခြေကုန်လက်ပန်းလည်း အလွန်ကျသွားပြီး ဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင် အိပ်ချင်လာပါတော့သည်။ အိပ်စရာနေရာကား မရှိ။
ရုတ်တရက် သတိရတာက အိမ်မှာ အစောဆုံးနိုးတာ ကိုမြင့်ကြည် ဖြစ်ပြီးတော့ ပထမဆုံးသူရဲ့အလုပ်က ဖေဖေ့ကားကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာပါ။ ဖေဖေသည် ဂိုဒေါင်ထဲတွင် ရပ်လေ့ရှိ၍ ကားကို တံခါးပိတ်လေ့မရှိ။ ကျွန်တော်တို့ကားဂိုဒေါင်သည် နှစ်ထပ် ဖြစ်ပြီး အောက်ထပ်တွင် ကားများ ဆိုင်ကယ်များ နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထားပြီး အပေါ်ထပ်တွင် ကားမောင်းသမားနှစ်ယောက် အပါအဝင် မေမေ့အလုပ် သမား ဆယ်ယောက်လောက် ၏ အခန်းလေးခန်း ရှိသည်။ အောက်ထပ် ဂိုဒေါင်၏ ဘေးပြတင်းပေါက်ကို သံပြား ပါးပါး(သို့) တုတ်ချောင်း နှင့် ဂလန့်ကို မ ဖွင့် လျှင်ပွင့်သည်။ ကျွန်တော်လည်း ထိုပြတင်းပေါက်မှာ အောင်မြင်စွာ ကျော်တက်ပြီး ကားနောက်ခန်းထဲ ဝင်ဝင်ချင်းကို အိပ်ပျော်သွားမိသည် ထင်ပါသည်။မနက်အစောကြီး ကိုမြင့်ကြည် ထ လာပြီး ကားအပြင်ထုတ်တော့ ကျွန်တော့်ကို တွေ့သည်။ “အနီကောင် ထ ထ ဘာလို့ ကားထဲလာအိပ်နေတာလဲ”
ကျွန်တော်က “ကိုမြင့်ကြည် မေမေ့ကို မပြောနဲ့နော် ၊ ညကျ တစ်ပြား ဝယ်ပေးပါ့မယ်”
ကိုမြင်ကြည့် မျက်နှာကြီး ဖြီးသွားပြီး အိမ်ထဲက ဖြိုးဖြိုးတံခါးဖွင့်ပြီး အပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်က မသိမသာလေး အိမ်ထဲပြန်ဝင် လို့ရအောင်တောင် ကူညီပေးလိုက်သေးသည်။
မနက် ၁၁ ခွဲလောက်မှ အိပ်ယာက ထဖြစ်သည်။ မနက်စာလိုလို နေ့လယ်စာလိုလို ထမင်း တစ်ပန်းကန်စားပြီးတော့ အိမ်အပြင်ထွက်ခဲ့သည်။ ခေါင်းရင်းက ဒေါ်ရွှေတို့ဝိုင်းထဲမှာ လူတွေ ရုတ်ရုတ်သဲသဲမို့ သွားစပ်စုကြည့်သည်။ ဒေါ်ရွှေက အလွန်အမင်း ငိုနေသည်။ မေမေလည်း မျက်နှာ မကောင်း။ ကျွန်တော်ရောက်လာသော်လည်း မေမေက ကျွန်တော့်ကို စကားမပြော။ကျွန်တော်စိတ်ပူသွားသည်။ ညက ဒေါ်ရွှေ့ကို ချောင်းတာများ သိသွားပြီး မေမေ့ကို ပြန်တိုင်တာများလား။ ကိုမြင့်ကြည်ကို အနီးတဝိုက်ကြည့်တော့လည်း မတွေ့။ ကျွန်တော် ရှက်လာသည်။ဒေါ်ရွှေ့ကိုကြည့်ရင်း မျက်နှာ မပြချင်လောက်အောင် ဖြစ်လာသည်။ ဒါနဲ့ အိမ်ဘက် ကို အမြန်ပြန်လာတော့ ဖေဖေ့ကားက ရှိနေသည်။ ဖေဖေ ရုံးမသွား။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ခက်ချေပြီ။ကျွန်တော်တော့ အကြီးအကျယ် အရှက်ရတော့မည်။
ကျွန်တော်တို့ အိမ်ဘက်ရောက်တော့ ကိုမြင့်ကြည်နဲ့ ဆိုက်ကား သမားနှစ်ယောက်က မိုးကာစများ နှင့် ခုံများကိုသယ်လာ ကြသည်။ ကျွန်တော်လည်း တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ။ ငါနဲ့တော့ မဆိုင်လောက်ဘူး လို့ စဉ်းစားမိပြီး ကိုမြင့်ကြည် ဘာဖြစ်တာလဲ ဗျ
“ဟာ အနီကောင် မင်းက အိမ်မှာနေပြီး အိမ်က အကြောင်းမသိဘူးလား။ အစ်မရွှေ့ အမျိုးသား ဆုံးလို့ တဲ့။”
“ဗျာ” ကျွန်တော် အံ့သြစွာ ရွတ်ဆိုမိသည်။ဒေါ်ရွှေက အမျိုးသားဆုံးတယ်သာဆိုတယ် ညတုန်းကတော့ အိပ်လိုက်တာ သိုးလို့.။ဝမ်းနည်းနေတဲ့ပုံလည်း မပေါ်ဘဲ မနက်ကျမှ ထ ငိုနေတာ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိ ပါဘူးလို့ စိတ်ထဲမှာ တွေးနေမိတယ်။ သူ စိတ်ပန်း ကိုယ်ပန်း ဖြစ်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတာ လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် လို့ပဲ မှတ်ယူလိုက်တော့သည်။ ချက်ခြင်းဆိုသလို ဒေါ်ရွှေ့တို့ခြံဘက် ကူးလာခဲ့မိသည်။ ဒေါ်ရွှေကိုမြင်တော့ ကျွန်တော် ဘယ်က ဘယ်လို စ ပြောရမှန်း မသိ။ ငိုနေသော ကိုမင်း နဲ့ ကိုရဲ ကိုမြင်တော့မှ “ဟေ့ကောင်တွေလာကွ ငါတို့ အပြင်သွားကြမယ်” ဆိုပြီး မရည်ရွယ်ဘဲ ပြောဖြစ်သည်။ ဒေါ်ရွှေတို့ အိမ်ထဲတွင် ဖေဖေပါ ထိုင်နေသည်ကို ကျွန်တော် ခုမှ မြင်တော့သည်။ ဖေဖေအနားသို့ ကပ်ပြီး
“ဖေဖေ သားကားယူသွားလို့ ရမလား ကလေးတွေကို အပြင်ခေါ်သွားလိုက်မယ် လေ”
“မြင့်ကြည်မအားဘူးကွ။ မင်းမောင်းတာ ငါစိတ်မချပါဘူး”
“ဖေဖေကလည်း သား ဒီမြို့ထဲမှာပဲ ဖြည်းဖြည်းမောင်းပြီးသွားမယ်လေ ဗျာ..။ ကလေးတွေ သနားပါတယ်။ သူ့အမေ ငိုတော့ ဘာမသိညာမသိ လိုက်လိုက်ိငို နေရတာပေါ့”
ဖေဖေ တစ်ချက် စဉ်းစားသွားသည်။ကျွန်တော်ပြောတာ မှန်သင့်သလောက်လည်း မှန်ပါသည်။ အကြီးကောင် ကိုမင်းက မှ ခြောက်တန်း။ ၁၂ နှစ်သား။ နားလည်နေပြီဆိုပေမယ့် သိပ်အသိတတ်ကြီး မဟုတ်သေး။ ကလေးဆိုတော့ ချော့ပြီး ထိန်းထားမယ့် လူရှိရင် မေ့နေမည်သာ။
“အေးအေး သတိထားမောင်း ကြားလား။ ကားသော့က ငါ့ စားပွဲပေါ်မှာ”
ဖေဖေ့ကားရတော့ ကျွန်တော်ဟိုနေ့က ငှားထားသော ဗီဒီယိုခွေ သုံးခွေကို ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထဲထည့်ယူလာပြီး ကိုရဲနှစ်ရဲ နှင့် ကိုမင်း တစ်ယောက် ကားတစ်စီးနဲ့ ထွက်လာပါတော့သည်။ ကျွန်တော်လည်း ထုံးစံအတိုင်း အပြင်ထွက်လျှင် ကိုအောင့်ဆိုင် အရင် ရောက်ဖြစ်သည်။တစ်ယောက်တည်း အဖော်မရှိတိုင်း ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးသော အနစ်နာခံတတ်သော စိတ်ထားကောင်းသော ကိုအောင့်ကို ညီအစ်ကို လို ကို ခင်နေသည်။
ကိုအောင့်ဆိုင်ဝင်ပြီး မြို့ထဲလိုက်ခဲ့ပါရန် ဆရာသမားကို တောင်းတောင်းပန်ပန် ပြောသော်လည်း ဒင်းက မလိုက်ချင်။ ဇွတ်ငြင်းသည်။ ထိုအချိန်တွင် အသက် ၃၅ ပတ်ဝန်းကျင် အမျိုးသမီးကြီး တစ်ယောက် စာအုပ်ငှားရန် ရောက်လာသဖြင့် လေးစားသမှုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် က ငြိမ်ငြိမ်လေး စကားမပြောဘဲ နေပေးကြသည်။ ထိုအမျိုးသမီးက စာအုပ်ရွေးအပြီး ကိုအောင့် ဆီမှာ စာအုပ်စာရင်း လာမှတ်တော့ ကိုအောင်က
“အစ်မ တစ်ယောက်တည်းလား ဘယ်သူ့မှ မပါဘူးလား”
“အင်း တစ်ယောက်တည်းပဲ ငါ့မောင်ရေ။အမျိုးသားက အလုပ်နဲ့ခရီးထွက်သွားတယ်။ တူမတော်က နေမကောင်းလို့တဲ့ အိမ်မှာ။ အဲဒါ သူ့အတွက် ဆေးလာဝယ်တာ ဒီနားက ဆေးဆိုင်က ညနေ ၆ နာရီမှ ဖွင့်မယ် ဆိုလို့ မထူးပါဘူးဆို စာအုပ်လာဝင်ငှားတာ”
“အော် ဟုတ်လား.။ ဆေးက မြို့ထဲသွားမဝယ်ဘူးလား အစ်မ။”
“မြို့ထဲသွားဖို့က ကိုယ်က စက်ဘီးလည်း မစီးတတ်၊ လမ်းကြုံကလည်း မရှိ နဲ့မို့လို့ ငါ့မောင်ရေ”
“အတော်ပဲ ကျွန်တော်တို့ အခုပဲ မြို့ထဲသွားမလို့.။ ကိုရဲမှာ ကားပါလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း မကြာဘူးအစ်မ။ လိုက်ခဲ့ပါ့လားဗျ။ အစ်မ ကျန်းမာရေးဆိုတာ အရေးကြီးတယ်။ မပေါ့နဲ့နော်။”
ကျွန်တော်လည်း ကိုအောင့်ရဲ့ချက်ခြင်းပြောင်းလဲသွားသော ဆုံးဖြတ်ချက် နဲ့ ပြာပြာသလဲ ဖြစ်နေသော အမူအရာ တို့ကို နားမလည်နိုင်ချေ..။ ရယ်လည်းရယ်ချင်မိသည်။
“အာ အားနာစရာကြီး ငါ့မောင်ရဲ့..။ ကားပိုင်ရှင်ကကော ခေါ်ချင်ပါ့မလားဖြင့် မသိဘဲနဲ့” ကျွန်တော့်ကို မျက်လုံးလေးစွေကြည့်ကာပြောသည်။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာတော့ “ဒီမိန်းမ မကြီးမငယ်ကြီးနဲ့ လာမူနေတယ်” လို့ထင်လိုက်သော်လည်း ကိုအောင့်မျက်နှာကြောင့်..
“အာ ရပါတယ် အန်တီ ကျွန်တော် တို့လည်းသွားမှာပဲ..။ တကူးတက ကြီးမှ မဟုတ်တာ”
“အဲဒါဆိုရင်တော့ လိုက်ခဲ့မယ်နော် ငါ့တူ”
“အာ အစ်မ ဘာမှ အားမနာနဲ့ ကိုရဲ က သဘောကောင်းတယ်ဗျ..။ကျွန်တော့်လိုပဲ ဟဲ ဟဲ” ကိုအောင်က ဝင်အရွှန်းဖောက်လိုက်ရင်း ထိုင်ခုံမှ ထ ကာ ဆိုင်ပြတင်းပေါက်များကို ပိတ်နေလေသည်။ ကျွန်တော်လည်း ကိုမင်း နှင့် ကိုရဲ ကို ခေါ်ကာ ကားပေါ်သို့ တင်ထားလိုက်သည်။ အမျိုးသမီးကြီးက အားတုံ့အားနာ ဟန် နဲ့ ကိုအောင့် နားမှာ ရပ်နေသည်။ကိုအောင်က “ကိုရဲ ဟေ့ကောင်၊ အစ်မကို ခေါ်လေဦး” ဆိုသဖြင့် ကျွန်တော်က ကားနောက်ခန်းတံခါး ဖွင့်ပေးရင်း “အန်တီ အားမနာနဲ့ လာလာ” လို့အားပေးလိုက်ပါသည်။ ကိုအောင်က ဆိုင်ခန်းတံခါး ပိတ်နေရင်းက “ ကိုရဲရေ ခဏ” ဆို၍ ကျွန်တော့်မှာ ကိုအောင့် ဆီ ပြန်ပြေးရပြန်သည်။ ဒီတွင် ကိုအောင်က “အဲဒါ မင်း နှင်းရဲ့ အဒေါ် ကွ” ကျွန်တော်လည်း ဆံပင်တွေ ဘာတွေ ထောင်သွားသလို ခံစားရသည်။ထူပူသွားသည်။
“အာ အဲဒါမှ ကွိုင်ပဲ”
“ဟေ့ကောင် အဲဒါ ကွိုင်မဟုတ်ဘူး။ အခွင့်အရေးကွ၊အခွင့်အရေး လဒရဲ့”
မူးတုန်းကသာ လက်သီးလက်မောင်း တန်းခဲ့သည်။တကယ့်တကယ်တန်းကျတော့ နှင်း အသံကြားရုံနဲ့ ဒူးတုန်ချင်နေသည်။ဒုက္ခပါပဲ နှင်းအဒေါ်ကြီးက ကားပေါ်ရောက်နေလေပြီ။ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရပါ့မလဲ။ ကိုအောင့်စေတနာ ကိုလည်း တော်တော်လေးစားမိသည်။ကိုအောင်က “မင်း ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားတွေ မလုပ်နဲ့၊ လှေကြီးထိုးရိုးရိုးပဲသွား ငါပြောတဲ့ အတိုင်းလိုက်လုပ် ဟုတ်ပြီလား” ကျွန်တော်လည်း ခေါင်းငြိမ့်ပြီး ကားဆီသို့လျှောက်လာခဲ့မိသည်။ သို့သော် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ တော့ စိုးရိမ်မှုတွေ ကြီးစိုးလျှက်…. အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ၈ နာရီကျော်ကျော်။ ထမင်းစားခန်းထဲဝင်တော့ ဒေါ်ရွှေ နဲ့ ကလေးတွေ စားနေတာ တွေ့သည်။ ဒေါ်ရွှေက “အနီကောင် ထမင်းစားတော့မလား” လှမ်းမေးတော့ “ခဏနေမှ စားမယ်” လှမ်းဖြေကာ..ကျွန်တော့် အခန်းသို့တက်လာခဲ့သည်။ကျွန်တော် ဘီယာသောက်လာသည်ကို တခြားလူများ အနံ့ရမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် တစ်ကြောင်း၊ ချောင်းရမည့် ဒေါ်ရွှေက ကျွန်တော်တို့ အိမ်တွင်ထမင်းစား နေ၍တစ်ကြောင်း အခန်းထဲတွင်သာ ယောင်လည်လည်။မူးလက်စ အရှိန်က အနည်းငယ် သွေးကြွလျက် ဖီးတက်နေသော အရှိန်ကလည်း ရှိနေသေးသည်၊ တစ်ခုခုလုပ်မည် ဆိုသော စိတ်ကလည်း ကြီးစိုးလျက်။
ကြံရာ မရသည့်အဆုံး စိတ်လျော့ကာ မိမိကိုယ်ကို ဖြေဖျော်ရန်သာ အကောင်အထည်ဖော်ရတော့သည်။ကျွန်တော့် အခန်းထဲမှ ရေချိုးခန်းထဲဝင် အင်္ကျီတွေ ဘောင်းဘီတွေ ချွတ်လိုက်သည်။ အတန်းငယ်မူးနေ၍ မိမိကိုယ်ကို မှန်ထဲမှ သေသေချာချာ ကြည့်မိသည်။ ဆံပင်အတန်ငယ်ရှည် ၍ လှိုင်းထကာ မျက်နှာပေါ်ကျနေသည်။ မူးနေ၍လားမသိ မျက်လုံးတစ်ဖက် နဲ့ တစ်ဖက်က မညီချင်..။ အသားခပ်လတ်လတ်ကို ရင်အုပ်အနည်းငယ်မောက်သည်။ အဆီပိုမရှိ ဆိုတာထက် ပိန်သည့်ဖက်ကို အနည်းငယ်လုသည်။ မှန်ကို အတန်ငယ်အောက်စိုက်လိုက်သည်။ မှန်ထဲတွင် ကျွန်တော်ညီလေးသည် ခေါင်းတစ်ဆတ်ဆတ်ငြိမ့်လျက်..။ ဆီပုလင်းမေ့ကျန်နေခဲ့သဖြင့် ဆပ်ပြာတုံးကို ကိုင်ပြီး ရေအနည်းငယ်ပက်ကာ အမွှေးများဖုံးအုပ်နေသော -ီးကို အသာအယာ ပွတ်ပေးရင်း ဇိမ်ခံနေမိသည်။ ကျွန်တော့် -ီးသည် ကြီးမားထွားကြိုင်းကာ အကြောအပြိုင်းပြိုင်း ထလျက်.ဒစ်ဖျားလေးတွင် နီရဲနေပြီး အဖျားနှင့်ကိုယ်လုံး ပိုင်းကို ပိုင်းခြားထားသော နေရာတွင် တော်တော်ကြီးသော အထစ်ကြီး ဖြစ်နေသည်။ ထိုနေရာကို လက်ကလေးနဲ့ ဖွဖွကိုင်၊ ဆပ်ပြာအမြှုတ်များများ နဲ့ ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ်လုပ်၍ ဂွင်းတိုက်သောအခါ ကျွန်တော့် တကိုယ်လုံး ရှိန်းတိန်းတိန်းဖြစ်လာအောင် ထိ ကောင်းလှပါသည်။ ကျွန်တော်မျက်စိ ကို မှိတ်လိုက်သည်။ နှင်းရဲ့ဖြူဖွေးမို့မောက်နေသော အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးက မျက်လုံးရှေ့ဝယ် တဝဲလယ်လယ်။ ကျွန်တော်သည် လက်တစ်ဖက်က -ီးကို ကိုင်ကာ ဂွင်းတိုက်လျက် တခြားတစ်ဖက်က ကျွန်တော့် ရှေ့မှ နံရံကို လက်နဲ့ထောက်ထားမိသည်။ ပါးစပ်ကလည်း အသံများထွက်သွားအောင် အနည်းငယ် ညည်းမိသည်။ ကျွန်တော်စိတ်လိုက်မာန်ပါ အားရပါးရ ဂွင်းတိုက်ပြီး ပြီးလုလု အချိန်တွင် အခန်းထဲမှ အသံကြား၍ ရေချိုးခန်းတံခါးကို ကြည့်လိုက်တော့ ရေချိုးခန်းတံခါးသည် ခပ်ဟဟ ပွင့်လျက်..။ မူးမူးနဲ့ တံခါးဂျက်ချဖို့မေ့ခဲ့ဟန်တူသည်။ မထူးတော့ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုတွေ့ပါစေတော့ ကျွန်တော် ရပ်လို့ မရနိုင်တော့။ ကျွန်တော့ -ီးကို အားရပါးရ လက်နဲ့ကိုင်ပြီး ခြောက်ခါ ခုနှစ်ခါ လောက် ဆက်ဆောင့်လိုက်တော့ ဖြူဖြူသုတ်ရည်မှ ပန်းထွက်ကာ ဆုံးခန်းတိုင်သွားသည်။ ကျွန်တော်လည်း အပြေးအလွှားတံခါးဆီသို့ ပြေးသွားမိသည်။ တံခါး ဆွဲမပိတ်မှီ ကျွန်တော့်အခန်းထဲကို ကြည့်လိုက်တော့ မည်သူမျှမရှိ။ ရေချိုးခန်းမှ ကိုယ်တခြမ်းထွက်ကာ အပြင်ဘက် ကျွန်တော့်အခန်းဝ ကို မျှော်ကြည့် အခန်းဝမှ ခန်းဆီး လှုပ်နေသည်။ သေချာပြီ တစ်စုံတစ်ယောက်တွေ့သွားလေပြီ။ မည်သူများ နည်း။
စဉ်းစားမရသည့် အဆုံး ရေမိုးချိုးပြီး အိပ်ယာပေါ်လှဲလိုက်ရာ အရက်ရှိန်ကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ပင်ပန်းထားသည်ကြောင့် တစ်ကြောင်း တုံးခနဲ အိပ်ပျော်သွားပါတော့သည်။ ကျွန်တော်နိုးတော့ မနက် ၂ နာရီခွဲ ။ ဗိုက်ဆာဆာ နဲ့ အောက်ထပ်ဆင်းလာတော့ ထမင်းစားပွဲပေါ်တွင် ကျွန်တော့်အတွက်ထင်၏ ထမင်း ခူးပြီးသား အဆင်သင့်။ သို့သော် အေးစက် နေလေပြီ။ ဗိုက်အလွန်အမင်းဆာနေသဖြင့် ထိုထမင်း နှင့် ဟင်း အေးအေး ကိုပင် မြိန်ရေရှက်ရေ စားမိတော့သည်။
စားသောက်ပြီးတော့ အဖြစ်အပျက်အားလုံးကို သေချာ ပြန်စဉ်းစားမိတော့ တရေးရေးပေါ်လာသည်။ ကျွန်တော်ပြန်လာကာ စ က ဒေါ်ရွှေ ထမင်းစားခေါ်သည်။ ကျွန်တော်ထမင်း မစားသေးသဖြင့် ထမင်းခူးပြီး ကျွန်တော့် အခန်းသို့ တက်ခေါ်ဟန်တူသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်က ရေချိုးခန်းထဲတွင် မိမိကိုယ်ကို ဖျော်ဖြေနေသည်။ ဒီအတိုင်းသာမှန်လျှင် ကျွန်တော်ဒေါ်ရွှေ့ကို ချောင်းရန် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြန်လာပြီး ကျွန်တော့်ကို ဒေါ်ရွှေက ချောင်းသွားသည်ပဲ။ ကွင်းဆက် တစ်ချက်က ဒေါ်ရွှေကိုယ်တိုင် တက်ခေါ်သည်လား။ တစ်ယောက်ယောက်ကိုများ ခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်လား။
ကျွန်တော့်ကို ထမင်းစား တက်ခေါ်သောသူသည် ကျွန်တော်ရေချိုးခန်းထဲက အဖြစ်အပျက်များကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်သွားသူပင် ဖြစ်သည်ကား မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲတော့ပေ။ မေမေ တို့ ဖေဖေတို့ မဖြစ်ပါစေ နဲ့လို့ သာ ဆုတောင်း ရတော့မည်။
ဒီနေရာမှာ ဇာတ်လမ်းကို နည်းနည်း အတိုချုပ်ရလျှင်တော့ ရက် အနည်းငယ် အတွင်းမှာ နှင်း နဲ့ ကျွန်တော် ချစ်သူများ ဖြစ်သွားကြသည်။နှင်း ဆီမှ အဖြေမရ ခင်က နှင်းအလုပ်ရှိရာသို့ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ရောက်ဖြစ်ပြီး၊ နှင်းဆီမှ အဖြေရပြီးတော့ နှစ်ရက်တစ်ခါလောက် သွားဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သွားတိုင်း ကိုအောင့်ကို အဖော်အဖြစ် ခေါ်သွားလေ့ရှိသည်။ ကိုအောင်က အဖြေမရခင် အချိန်လောက်က ခေါ်တိုင်းမလိုက်ချင်၊ တော်တော်ခက်ခက် ခဲခဲ ခေါ်ရသည်။ အဖြေရပြီးနောက်ပိုင်း တွင် ခေါ်ရမခက်တော့၊ တခါတရံ သူကပင် ကျွန်တော့်ကို ပြန်စောင့်နေတာမျိုးဖြစ်နေတတ်သည်။ အကြောင်းရင်းစစ် တော့ ကိုအောင်လည်း အချစ်နယ်ထဲသို့ ဝင်မိလေပြီ။ နှင်းတို့ အလုပ်က မသပြေ ကို ကိုအောင် စိတ်ဝင်စားလေသည်။ ပထမဆုံးနေ့ နှင်းတို့ အလုပ်ကို သွားခဲ့စဉ်က မသပြေ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ခဲ့ကြသည်။ မသပြေအလှ သည် ထို့နေ့ များက ပင် ကိုအောင့် နှလုံးသား ကို လှုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည် တဲ့။ ကိုအောင်သည် ကျွန်တော့်လိုမဟုတ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် ပြတ်သားသည်၊ စကားပြောပါးနပ်သည်။ စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိသည်။ စိတ်နှလုံးကား အထူးကောင်းမွန်သည်။သူ့အိမ်မှာ အငယ်ဆုံးဖြစ်၍ ဆရာလုပ်ချင်သည်၊
မသပြေ အလှကား တည်ငြိမ်၏။ အေးဆေး၏။ အရပ်မြင့်မြင့် ကိုယ်လုံးထွားထွား၊ ဆံပင်ရှည်ရှည် နဲ့မသပြေ။ မျက်နှာသည် လှသည်ထက် ကျက်သရေ ရှိသည်ဟု ဆိုရမည်ထင်သည်။
ကျွန်တော် အဖြေရပြီးတော့ တစ်လလောက် အတွင်းမှာ ပင် ကိုအောင် နဲ့မသပြေ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြသည်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ အတွဲနှစ်တွဲသည်ဘယ်သွားသွား အတူတူတွေ။ ထူးထူးခြားခြားခွဲသွားတာမျိုး သိပ်မရှိ။ အသုပ်ဆိုင်ထိုင်၊ ပန်းခြံထဲသွား၊ဘုရားသွား နဲ့သာ အချိန်တွေကုန်ခဲ့ကြသည်။
သူတို့က အသက် ၃၀ နီးနီး တွေ၊ ကျွန်တော်တို့က ၂၀ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ ဖြစ်သဖြင့် အတွဲ ပုံစံချင်းတော့ မတူလှ။ သူတို့နှစ်ယောက်က တွေ့လျှင် လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စ၊ စီးပွားရေး၊ ပိုက်ဆံ စတာတွေကို စိတ်ဝင်စားသလောက် ကျွန်တော်တို့က နှင်းကြိုက်တတ်သော အင်္ကျီအရောင်၊ ဖိနပ်အသစ်၊ လက်သည်းနီလှလှ၊ ဆံပင်ပုံစံ၊ ကျွန်တော့် ဂျင်းဘောင်းဘီအကြောင်း စတာတွေကို စိတ်ဝင်စား ဆွေးနွေးကြသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုအောင် နဲ့ မသပြေ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားတာကို အလွန်သဘောကျသည်။ လိုက်ဖက်တာတွေ ဘာတွေ ကျွန်တော်သိပ်မသိ။ ကျွန်တော်သိသည်က ကိုအောင့်ကို အဖော်ခေါ်ရ လွယ်ကူခြင်းပင်။
ဒီလိုနဲ့ သုံးလလောက် အကြာ ဆောင်းအကူးရာသီလေးမှာ မသပြေအိမ်က လူကြီးတွေက သူတို့ အချစ်ရေးကိစ္စ ကို သိသွားသည်။ ပြသနာ အကြီးအကျယ်တက်တော့သည်။ တက်သည့်ပြသနာ က သူတို့နှစ်ယောက်ကို အမြန်ဆုံး လက်ထပ်စေလိုခြင်းပင်တည်း။သူတို့နှစ်ယောက်က စီးပွားရေးကိစ္စ ပိုက်ဆံကိစ္စ တွေ တွက်ချက်ပြသော်လည်း တစ်ဦးတည်းသော သမီးသာရှိသော မသပြေ တို့ မိဘများဘက်မှ အမြန်ဆုံး မြေးချီချင်သော ရောဂါကို မဖုံးလွှမ်းနိုင်။ ကိုအောင်တို့ဘက်ကလည်း သဘောတူ အဆင်ပြေသည်။ လက်ထပ်ပြီးလျှင် ကိုအောင့်အိမ်မှာပင် ကိုအောင့်အဖေ နဲ့ပေါင်းနေကြမည်ဆိုတော့ နေစရာလည်း အဆင်ပြေသည်။ သည်တော့ အားလုံးက လောကြတော့သည်။
ကိုအောင့် မင်္ဂလာကိစ္စတွေကို စီစဉ်တော့ နှစ်ဖက်လုံးက ဆွေမျိုးအားနည်းတာကတစ်ကြောင်း၊ ကျွန်တော်တို့မြို့မှာပင် မင်္ဂလာပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်သဖြင့် မသပြေတို့ဖက်မှ နေ့စဉ်ရက်ဆက် မလာနိုင်တာက တစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အိမ်မှ လူအင်အားကို သုံးကြရသည်။ ကျွန်တော်တို့အိမ်သားများက အတက်ကြွဆုံးကူညီပေးကြသည်။ သူတို့မင်္ဂလာဆောင် အတွက် ဖိတ်စာ၊ လက်ကမ်းဝေဖို့ ပစ္စည်းများကို ဒေါ်ရွှေ နေသော အိမ်တွင် အခန်းတစ်ခန်း စီစဉ်ကာ ထည့်ပေးထားလိုက်သည်။ မသပြေက တခြားမြို့တွင် နေသဖြင့် ကျွန်တော်တို့မြို့ ကို ကူးလာလိုက် ပြန်သွားလိုက် နှင့် သူ့ခမျာ အတော်ပင်ပန်း ရှာသည်။ ဒေါ်ရွှေ အစီအစဉ် နဲ့တခါ တရံ မသပြေ ဒေါ်ရွှေတို့ အိမ်မှာပင် အိပ်သည်။
ဇာတ်လမ်းကို အစပျိုးသူက ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်။ တရားခံ ကိုစစ်သော် အပြစ်ရှိသူက ကျွန်တော်ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကိုအောင့်မင်္ဂလာဆောင် အတွက် ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့် အထွာနဲ့ကျွန်တော် ပင်ပန်းသည်ဟု ဆိုရမည်။ လူငယ်ကိစ္စဖြစ်သော စပီကာ ကောင်းကောင်း ရနိုင်သော နေရာများ၊ တီးဝိုင်းကိစ္စ အဆိုတော်ကောင်းကောင်းများ လိုက်ရှာပေးရသည်။ လက်ဆောင်ပြန်ကမ်းဖို့အတွက် နဲ့ လူပျိုရံ အပျိုရံတွေ ရှာပေးရ။ သူတို့အတွက် အဝတ်အစားတွေ စီစဉ်ပေးရ စသဖြင့် တောက်တိုမယ်ရလေးတွေ လိုက်လုပ်ရသည်။ အလုပ်အနေနဲ့ ဘာမှ အပန်းမကြီးလှသော်လည်း လုံလောက်သော အချိန်မရနိုင်ဘဲ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် အပြေးအလွှား ပြီးစီးအောင် လုပ်ကြရသောကြောင့် စိတ်ပန်းရသည်။ စိတ်ပန်းတော့ လူပါနွမ်းသည်။လူနွမ်းလေတော့ ညနေပိုင်းဆို ဘီယာဖြန်းမှ လန်းတယ် ထင်တော့သည်။
မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ သုံးလေးရက်အလိုတစ်ညနေ ကျွန်တော်ဘီယာဆိုင်သွားချင်သည်နှင့် ကိုအောင့်ကို မရမက အတင်းခေါ်မိသည်။ကိုအောင်က မသပြေ လာလို့ မတွေ့လျှင် စိတ်ဆိုးမည်ဟု ဆိုကာမလိုက်။ ကျွန်တော်က အတင်းမရမက ခေါ်။ နောက်ဆုံး မသပြေ မရောက်မှီ(စောစောစီးစီး) အိမ်ပြန်ဖို့သဘောတူညီပြီးထွက်လာခဲ့ကြသည်။ ဘီယာဆိုင်ရောက်တော့ နှင်းဦးလေး ဦးထွန်းရှိန် တစ်ယောက်တည်းထိုင်ပြီး တစ်ခွက်တစ်ဖလား မရပ်မနား ဆွဲနေတာနဲ့ တွေ့လေသည်။ဖားချင်နေသူ ကျွန်တော်နဲ့ သူနဲ့ခင်တဲ့ ကိုအောင် တို့လည်း ဝိုင်းပေါင်းလိုက်ကြသည်။ ရောက်တတ်ရာရာ လေးတွေ စပြောကြသည်။ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် တစ်ဂျားကုန်တော့ ဦးထွန်းရှိန်က ပြန်မည် ဆိုပြီး ပိုက်ဆံရှင်းဖို့လုပ်သည်။ ကိုအောင်က ပိုက်ဆံ ကို သူရှင်းမည် ဆိုတော့ ဦးထွန်းရှိန်က အရှင်းမခံ။ကိုအောင်က သူ့ မင်္ဂလာဆောင် အတွက် ပြုစု တဲ့အနေနဲ့ လက်ခံပါဆိုတော့
ဦးထွန်းရှိန်က “ဒါဆို မင်းက ငါ့ကို ဒီ့ထက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုစု သင့်တာပေါ့ကွ။” လို့ ဆိုပါတယ်။
ကိုအောင်က “ ပြုစု ပါတယ် အစ်ကိုရယ်။ အစ်ကို ထပ်သောက်ချင်သောက်ဦး” ဟု ပြောလိုက်သည်။ဒီမှာ ဦးထွန်းရှိန်မျက်နှာ အနည်းငယ် တင်းမာသွားသယောင် ရှိ၏။ မတ်တပ်ရပ်နေရာမှ ပြန်ထိုင်လိုက်သည်။ စားပွဲထိုးတစ်ယောက်ကို လှမ်းအော်ခေါ်လိုက်သည်။ စားပွဲထိုးလေး ရောက်လာတော့ “သား တို့ဆိုင်မှာ ဘာ အပြင်းတွေ ရလဲ ကွ”
စားပွဲထိုးလေး ရွတ်ပြသော အမည်များစွာထဲမှ Black Cat ဆိုသော ဝီစကီ ပုလင်းကြီးကို ဦးထွန်းရှိန်မှာသည်။
ပြီးတော့ “မင်းပြုစုတာကို ကိုယ်လက်ခံ တယ် အောင်အောင် ၊မင်းတို့သေသေချာချာ ပြုစုဖို့ တော့ လိုတယ်နော်”လို့ ဆို လာပါတော့တယ်။
ဒီမှာ ကိုအောင်ကလည်း “ပြုစု ပါတယ်အစ်ကို၊ ကျွန်တော် တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲဆောင်မယ့် မင်္ဂလာဆောင်အတွက် ကျွန်တော့်မှာ ရှိသမျှ စည်းစိမ်ကုန်သွားဦးတောင် ကျွန်တော်ညည်းမိတယ် ဆိုရင် ကျွန်တော့်ပါး ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်လိုက်မယ်။ အစ်ကိုကြိုက်တာ စား၊ကြိုက်တာသောက် ကျွန်တော်ပြုစုမယ်။ဒါကျွန်တော့် မင်္ဂလာဆောင် အတွက်..။” သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက်နက်အသင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အနေအထားမှာ ကျွန်တော့်ခမျာ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ကျီးကြည့်ကြောင်ကြည့် အလွန် စိတ်ညစ်မိလေသည်။
စားပွဲထိုးလေး အရက်ပုလင်း လာချ တယ် ဆိုရင်ပဲ ဦးထွန်းရှိန်က သွက်လက်စွာ ဖောက်လိုက်ပြီး ခွက်သုံးခွက်ကို တစ်ပက်ကျော်ကျော် စီလောက် မျှ ထည့်ပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်က “ဦး ကျွန်တော် အပြင်းမသောက်ဘူး” ဆိုတော့
ဦးထွန်းရှိန်က “မင်းတို့ပဲငါ့ကို ဧည့်ခံ ချင်တယ်ဆို ကွ” ဟုပြောလာပါသည်။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲတွင်လည်း ထောင်းခနဲ ဖြစ်သွားသလို ကိုအောင်ကိုကြည့်တော့ ကျွန်တော့်ကို မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြီး ခေါင်းညိတ်ပြပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း ခပ်တည်တည် နဲ့ တစ်ခွက်ယူလိုက်သည်။ ကိုအောင်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ အကြိုက်ခွေးတောက်ရွက် နဲ့ ကြက်ရိုး ဟင်းချိုမှာသည်။ ပြီးတော့ ဦးထွန်းရှိန်ဖက် လှည့်ကာ “အစ်ကိုကြိုက်တာ မှာပါ။ အစ်ကိုနဲ့ ကျွန်တော် တစ်ခါမှ တွဲမသောက်ဖူးလို့ အစ်ကို့အကြိုက် ကျွန်တော်မသိလို့ပါ။”
ဦးထွန်းရှိန်က ခေါက်ဆွဲကြော် မှာသည်။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ တော့ အလွန်ပြုံးချင်နေသော်လည်း တော်တော်ထိန်းထားရသည်။ ကိုအောင်က ကျွန်တော့်ဖက်လှည့်ကာ “ကိုရဲကော ၊ မှိုကန်စွမ်းပဲလား” ဆိုပြီး မေးပါသည်။ကျွန်တော့်အကြိုက်ကို သိနေသော ကိုအောင့် အမေးကို ကျွန်တော် ခေါင်းညိတ်ဖြေလိုက်ပြီးချိန်ဝယ် ဦးထွန်းရှိန်ရဲ့ အကဲခတ်တဲ့ မျက်လုံးများကို ကျွန်တော်ဖြတ်ခနဲ တွေ့လိုက်မိပါသည်။ဦးထွန်းရှိန်က “မင်းက နှင်းသူငယ်ချင်း ဆိုတာလား” ဟုကျွန်တော့်ကို မေးလာပါတယ်။
ကျွန်တော်က ခပ်တည်တည် ပဲ ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်သည်။ရင်တော့လေးသည်။ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်ဦးမလဲ မသိ။
ဦးထွန်းရှိန် စကားစသည် ကိုအောင့်ဖက် လှည့်၍ “မင်းက ဘာလို့ ဒီအသက်အရွယ်ကျမှ မိန်းမ ယူတာလဲကွ၊”
ကိုအောင်က ခပ်အေးအေးပင် “အခုမှ အချစ်တွေ့လို့ပေါ့ဗျာ”
“ဒါမင်းရဲ့ ရည်းစားဦးလား ကွ။ မင်းတို့ကောင်တွေ အံ့ပါရောကွာ။ ငါဖြင့် ၁၅ နှစ်သားလောက်ကတည်းက ရည်းစားထားရုံ မကဘူး။ကိုယ်ဝန်တားဆေး ဘယ်မှာဝယ်ရတယ် ဆိုတာတောင် သိနေပြီကွ။” ဦးထွန်းရှိန်က အရက်ခွက်ကို ကောက်မော့လိုက်သည်။
ရေအနည်းငယ်ကို သောက်ပြီးနောက် “မင်းတို့တွေ ငါငယ်ငယ်က ပုံများ မြင်စေချင်တယ်ကွာ” ဟု အနည်းငယ် ပူထွက်နေသောဗိုက်ကလေး ကို ပွတ်ကာ ပြောလေသည်။
ကျွန်တော်က “ ဦးက စော်ကြည်ဘဲ နဲ့တူတယ်” ဆိုပြီး စကားထောက်ပေးလိုက်ရာ
ဦးထွန်းရှိန်က “မြာလေးတွေ ကြည်ဖို့ဆိုတာ ရုပ်တွေ ဘာတွေ မလိုဘူးကွ ဒါ ရှိဖို့ပဲ လိုတယ်” ဟုဆိုပြီး လက်ညိုးနဲ့ လက်မ ကို ကွေးပြသည်။ထိုအချိန်မှ ကျွန်တော်က သူ့ရုပ်ရည် အနေအထားကို အကဲခတ်မိတော့သည်။ ဦးထွန်းရှိန်သည် အသားခပ်ညစ်ညစ် ၊ အရပ်ပုပု နဲ့ လူက ခပ်ညှပ်ညှပ် ပိန်ပိန် ရှိသော်လည်း ဗိုက်နေရာတွင်ကား အလန့်တကြား ရှေ့သို့ ထွက်နေသည်။ နှုတ်ခမ်းမွှေးခပ် စစ ရှိသော်လည်း မဲနက်နေသော အသားတွင် သိပ်မထင်ရှားနိုင်ရှာချေ။ အသက်လေးဆယ်ကျော်ခန့် ရှိပုံရသည်။ အရက်နှစ်ခွက်ခန့် ဝင်သွားသော ဦးထွန်းရှိန်သည် မိန်းမကိစ္စ နဲ့ပတ်သက်သော ပက်ပက်စက်စက် အသုံးအနှုန်းများဖြင့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကို လက်ချာပေးပါတော့သည်။
ကိုအောင်က “အစ်ကိုမှာ မိန်းမ ဘယ်နှယောက် ရှိလဲဗျ” ဆိုတော့
ဦးထွန်းရှိန်က “မင်းက ငါ့ကိုရိတာလားကွ။” ဆိုပြီး စားပွဲကို လက်နဲ့ပုတ်လိုက်ရာ ဘေးဝိုင်းမှ လူများပင် လှည့်ကြည့်ကုန်ကြသည်။
ကိုအောင်က “ အစ်ကို ကို ရိတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က တကယ်သိချင်လို့ မေးကြည့်တာပါ။ အစ်ကိုဒီလောက် ပညာတွေ စုံတော့ မိန်းမတွေအများကြီးရှိမယ် ထင်မိလို့ပါဗျာ” ဆိုမှ ငနဲသားက တဟဲဟဲ နဲ့ သဘောတော်ကျလေသည်။အရက်လေးခွက် ခန့်ဝင်သော အချိန်တွင် ဦးထွန်းရှိန်က “ဘယ်ကောင့်မှေ-ာက်ဂရုမစိုက်ဘူးကွ” ဆိုတာမျိုးတွေကို အော်ကြီးဟစ်ကျယ် နဲ့ထပ်ခါ တလဲလဲ ပြောတော့သည်။ဘေးက ဝိုင်းမှ လှည့်ကြည့်လျှင်လည်း “မင်းတို့က -ီးဖြစ်လို့ ကြည့်တာလား ကွ” ဆိုပြီး ပြသနာတွေ အလုံးအရင်း နဲ့ရှာပါတော့သည်။ တော်တော်များများက ကိုအောင့် အသိနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို သိနေပေလို့ ရှောင်သွားကြသည်။နောက်ဆုံး ဆိုင်ရှင်တရုတ်ကြီးက ဆိုင်ကိုအပြပိတ်လိုက်ရသည့် အဆင့်ရောက်ကုန်သည်။ ကိုအောင်က လက်ကျန် ပုလင်းကို ကောက်ဆွဲပြီး ကောင်တာမှာ ပိုက်ဆံသွားရှင်းသည်။ကျွန်တော်နဲ့ ဦးထွန်းရှိန် နှစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့ချိန်တွင် ကျွန်တော့်အတွက် ငရဲခန်းတမျှ။ ကျွန်တော့်ဘဝတွင် ဒီလိုအဖြစ်မျိုးသည် ဒီအကြိမ်ပထမဆုံး ဖြစ်ပေရာ အလွန်အမင်းစိတ်နောက်ကျိ ထွေပြားရပါသည်။နှင်းဦးလေး တစ်ယောက်အဖြစ်ဖားချင်သည့် စိတ်တွေလည်း ကုန်ချေပြီ။
ဆိုင်ပြင်ရောက်တော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်က ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ခွပြီး ဦးထွန်းရှိန်ကိုနှုတ်ဆက်ကာ အမြန်ဆုံး လစ်ပြေးကြတော့သည်။
လမ်းတွင်ကိုအောင်က “လခွီးတဲ့မှပဲ အရက်တောင် ကောင်းကောင်း မသောက်ရဘူး။” ဟုဆိုကာ အသုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့မောင်းလေတော့သည်။အသုပ်ဆိုင်ရောက်လျှင် ကိုအောင်က အသုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင် အန်တီကြီးကို “ယောက္ခမ ရေနွေးကြမ်းအိုး အလွတ်တစ်အိုးဗျာ။ အစုံသုတ်တစ်ပွဲ၊ ဂျင်းသုတ်တစ်ပွဲ အအေးနှစ်လုံးပေးဗျာ။မြန်မြန်လေး” ဟုဆိုကာ ချောင်ကျသော ခုံတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ရေနွေးအိုးအလွတ်ထဲကို ဝီစကီ လက်ကျန်များထည့်ပြီး ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မျှ သောက်ဖြစ်ကြသည်။
ခဏကြာမှ “ဒီခွေးပစ်တဲ့ဒုတ်က ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် လူမိုက်ပုံစံဖမ်းနေတာကွ။လခွက်ထဲမှ နာနုနှစ်ချက်လောက် လက်ပြန်ရိုက်လိုက်ရင် ဂိန်ဂိန် တောင် အော်ဦးမယ့်ကောင်က။ လူ့ယဉ်ကျေးအသိုင်းဝိုင်းမှာ အမည်းစက် မထင်ကြချင်လို့ ရှောင်ပေးနေတာကို အကောင်းမှတ်လို့ကွာ။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင် ဒီလိုကောင်တွေ ရှိနေသမျှ မြန်မာ ဆိုတာ လူ့နင်းပြား ဖြစ်နေဦးမှာပဲကွ” ဟု ရှည်ရှည်လျားလျားပြောပါသည်။
ကိုအောင့် ကြည့်ရသည်မှာ ဒေါသထွက်သည်ထက် ပို၍ လေးနက်နေသည်။ကျွန်တော်လည်း ဒီကိစ္စကို ဆက်ပြီး မစဉ်းစားချင်တော့လောက်အောင် ပင်ပန်းစိတ်ကုန်နေလေပြီ။ နောက်ဆုံးအကြံရသည်က “ကိုအောင် မသပြေစောင့်နေလောက်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ပြန်ရအောင်။ ဖိတ်စာတွေဝေဖို့လူစာရင်းတွေလည်းလုပ် ရဦးမယ်ဗျာ” ဆိုတော့ ကိုအောင်လည်း ခပ်သုတ်သုတ် သောက်သည်။ ကျွန်တော့်ခွက်ထဲကိုလည်း မျှထည့်ရင်း ရှိသမျှကို အပြီးသတ်သည်။ နှစ်ယောက်သား ထပြန်ပြီး ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင် လေတိုးခံရတာကတစ်ကြောင်း၊ ဝီစကီရဲ့အရှိန်က တက်လာတာတစ်ကြောင်းဆိုတော့ ကျွန်တော့် လို အူရိုင်းက အလွန်အမင်းမူးပါတော့သည်။ကိုယ့်ကိုယ် ကို မထိန်းနိုင်သဖြင့် ကိုအောင့် ကျောကို မှီထားရသည်။ လမ်းက ကွင်းပြင်ကျယ်နေရာတစ်ခုရောက်တော့ ကိုအောင် ဆိုင်ကယ်ရပ်လိုက်သည်။ကျွန်တော့်ကို ဆိုင်ကယ်ပေါ်က ဆွဲကူချ ရင်း “ဟေ့ကောင် မင်းအာခေါင်ကို လက်ထိုးအန်ပလိုက်” ဟုပြောလာပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း သိက္ခာအကျ(ဘာသိက္ခာမှန်းတော့ ခုချိန်ထိမသိပါ) မခံချင်သဖြင့် “အာ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်မအန်ဘူး” ဆိုပြီးခေါင်းမာနေပါသည်။ “မင်းမအန်လည်း နေကွာ ငါတော့ သောက်တာများသွားတယ် အန်လိုက်ဦးမယ်” ဆိုပြီး လမ်းမနဲ့ ခပ်လှန်းလှန်းမှာ ခပ်တုပ်လေးထိုင်ပြီး တဝေါဝေါနဲ့ အန်လေသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာ ကိုယ်တစောင်းထိုင်ရင်း လေတိုက်တိုင်း လန်လန်သွားချင်သော ခေါင်းကို မနည်းလိုက်ထိန်းနေရပါသည်။ ခဏကြာတော့ ကိုအောင် ကျွန်တော့်ကို လာဆွဲပြီး ကွင်းပြင်ဖက်သို့ ခေါ်သွားသည်။
ခပ်လှန်းလှန်းရောက်တော့ “ဟကောင်ရ မင်းတို့ငါတို့ အရက်သောက်တယ် ဆိုတာ မသောက်ရ မနေနိုင်ပေါင် ဖြစ်နေလို့သောက်တာလည်း မဟုတ်ဘူး၊ခပ်တုံးတုံးလူတွေလို မူးမှမိုက်ရဲလို့ လူမိုက်လုပ်ချင်လို့ သောက်တာလည်း မဟုတ်ဘူး၊ခပ်ရူးရူးလူတွေလို အရက်သောက်တာ ယောက်ျားပီသချင်လို့ ငါဘယ်နှခွက်သောက်နိုင်တယ် ကွဆိုပြီး စံချိန်တင်ချင်လို့ သောက်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ မင်းတို့ ငါတို့အရက်သောက်တယ် ဆိုတာ စိတ်ပျော်ရွှင်မှု အတွက် အပျော်သောက်တာကွ။သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့စကားပြောကောင်းရုံသောက်တာကွ။ အရက်သောက်တာများသွားလို့ ပြန်အန်ထုတ်တယ်ဆိုတာ ကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်၊အားပေးသင့်တဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ကွ။အမူးလွန်နေတော့ မင်းသောက်ထားသမျှကို ဘာမှ မခံစားနိုင်ဘဲ အချိန်တွေကုန်၊လူပင်ပန်းသွားတော့ ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိဘူး။ေ-ာက်သုံးမကျတဲ့ အတွေးတွေကို ခေါင်းထဲကို ထည့်မထားပါနဲ့ကွာ” ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို အတင်းအန်ခိုင်းတော့ ကျွန်တော်လည်း အာခေါင်ထဲ လက်ညှိုးထိုးပြီးအန်ပါတော့သည်။
ခဏနေတော့ ကိုအောင်က “မင်းပေါ့သွားပြီလား၊ တစ်ဆို့ဆို့နေသေးသလား” ဆိုတော့ ကျွန်တော်က “နည်းနည်းကျန်သေးတယ် ထင်တယ်” ဆိုပြီး ထပ်ပြီးအန်ပါသည်။ သုံးခါလောက်အန်ပြီးတော့ ကျွန်တော်နေလို့ထိုင်လို့ ပေ့ါသွားပါသည်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ကွမ်းဆိုင်မှာ ကွမ်းမှာထားတာကို စောင့်ရင်းဘေးက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ခဏဝင်ထိုင်ကာ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ဆီ သောက်၊ ရေနွေးကြမ်းနှစ်ခွက်ဆီလောက် သောက်လိုက်ရာ ကျွန်တော်လည်း တော်တော်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ဒေါ်ရွှေ့အိမ်ရောက်ချိန်မှာတော့ ညဆယ်နာရီခန့်ရှိလေပြီ။ အိမ်ရှေ့တွင် မသပြေ နဲ့ဒေါ်ရွှေ စာအုပ်လေးတွေ ရှေ့ချပြီး စကားထိုင်ပြောနေကြသည်။ မသပြေက ကိုအောင်ကိုမြင်တော့ "ရှင်ညကြီးမိုးချုပ် ဒီအချိန်ကြီးဘာလာလုပ်တာလဲ၊ မနက်ကျမှ လာခဲ့" ဆိုပြီး မတ်တပ်ထ ရပ်ကာ သူ့ကိုပေးထားသော အခန်းထဲသို့ ဝင်သွားလေသည်။ ကိုအောင်လည်း လျှင်မြန်သော အဟုန်နဲ့ မသပြေနောက်သို့လိုက်သွားလေသည်။ ကျွန်တော်နဲ့ဒေါ်ရွှေသာ နှစ်ယောက်သား မှင်သက်ပြီးကျန်ခဲ့လေသည်။ ဤသည်ကား ဇာတ်လမ်း၏ အလယ်။
ဒေါ်ရွှေ တို့ဧည့်ခန်းသည် အလွန် ရိုးရှင်းသည်။ အောက်ခံ တမံသလင်းပေါ်တွင် တမိုက်ခန့်အမြင့်သစ်သား ခုံကို တစ်ခန်းလုံးအပြည့် ခင်းထားသည်။ထိုသစ်သားခုံ ကြမ်းများကို ဒေါ်ရွှေက ပြောင်လက်နေအောင် ရေနံ နဲ့ပွတ်တိုက်ထားလေ့ရှိသည်။ဧည့်သည်လာလျှင်တော့ သင်ဖြူးဖျာချောများခင်းပေးတတ်သည်။ ယခုမူ သင်ဖြူးဖျာကြီးနှစ်ချပ် ခင်းထားပြီး ဒေါ်ရွှေက ဖျာပေါ်တွင်ထိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်လည်း ဖိနပ်ချွတ်ပြီး ဖျာပေါ်တွင် ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ဒေါ်ရွှေက
“အနီကောင် နင် အရက်တွေသောက်လာတယ် လား”
ကျွန်တော်က “ကိုအောင်တို့ မင်္ဂလာပွဲကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ဘီယာလေးနည်းနည်း သောက်တာပါဗျာ” ဟု မုသားဆိုရင်း ခပ်ကုပ်ကုပ်ဝင်ထိုင်မိသည်။
“နင်အရက်သောက်တာ အစ်မတို့ မသိစေ နဲ့ သိရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မယ် ကြားလား”
“ဟုတ်။ ဒေါ်ရွှေလည်း သွားမပြောနဲ့နော်”
အမှန်က ဖေဖေက အရက်ကို စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ သောက်တတ်ဖို့သာပြောထားပါသည်။ မေမေကတော့ ကျွန်တော်အရက်သောက်ကြောင်း သိတော့သိပေမည်။သို့သော် မမြင်ဖူးသေးချေ။
“ကဲ..ငါ ကလေးနှစ်ယောက်ကို ခြင်ထောင်ထဲသေချာ ထည့်လိုက်ဦးမယ်။” ဟုဆိုကာ ထိုင်နေရာမှ ဒူးပေါ်လက်ထောက်ကာ ထ လေသည်။နိမ့်တုံမြင့်တုံ တင်ပါးကြီးများကို သယ်သွားပြီး ခပ်လှန်းလှန်းတွင် ထမီကို ခပ်တင်းတင်းဖြစ်အောင်ဆွဲ ဝတ်လိုက်လေသည်။ဒေါ်ရွှေ အခန်းထဲဝင်သွားပြီး ဧည့်ခန်းထဲတွင် တစ်ယောက်တည်း ငေါင်တောင်တောင် ပျင်းပျင်းရှိသည် နှင့် ဒေါ်ရွှေတို့ ကြည့်နေသော စာအုပ် နှစ်အုပ်ကို ဆွဲယူကြည့်မိသည်။ ပထမစာအုပ်သည် ဖိတ်စာဖိတ်ဖို့ လူစာရင်းမှတ်ထားသော ဗလာစာအုပ်တစ်အုပ်။ ဒုတိယ စာအုပ်သည်ကား ကျွန်တော် ဖတ်ချင်လွန်းသော်လည်း မဝယ်ရဲခဲ့သည့် ဖိုမ ဆက်ဆံ ရေး စာအုပ်။ ယူဖတ်သင့်မဖတ်သင့် ကျွန်တော့် ထုံးစံအတိုင်း တွေဝေနေမိသည်။အတန်ကြာမှ ထိုစာအုပ်ကို လှန်ကြည့်မိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဖီးလ်တက်သော်ငြားလည်း သေးငယ်နေတတ်သည့် ကျွန်တော့်လိင်အင်္ဂါအကြောင်းကို အဓိကထားရှာဖွေမိသည်။ စာအုပ်ကိုမှ နွေးအောင်မကိုင်ရသေးခင် ဒေါ်ရွှေက ခေါင်းအုံး တစ်လုံးနဲ့ ယပ်တောင် တစ်ချောင်းကိုင်ပြီး ဧည့်ခန်းထဲပြန်ထွက်လာသည်။
“နင်ဒီမှာပဲ အိပ်ချင်အိပ်လိုက်တော့၊ အစ်မတို့ သွားနှိုးရင် သူတို့ပြန်အိပ်မရ ဖြစ်နေဦးမယ်။”
ဟု ခေါင်းအုံးကို ဖျာပေါ်တွင်ချ ၊ ယပ်တောင်ကို ကျွန်တော့်ဆီ လက်ကမ်း၊ စာအုပ်နှစ်အုပ်လုံးကို သိမ်းရင်း ပြောပါသည်။ဒေါ်ရွှေက “အနီကောင် နင်ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်နေတာလား။ ဒီစာအုပ်က အိမ်ထောင်ပြုမယ့်အရွယ်ရောက်မှ ဖတ်ရမယ့် စာအုပ်ဟဲ့။ နင်အခု မဖတ်နဲ့ဦး။နင်အခု ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုရပ်နိုင်အောင် အရင်ကြိုးစား။ နင့်အဖေ အမေချမ်းသာတာ နင်ချမ်းသာတာ မဟုတ်ဘူး။”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒေါ်ရွှေ ။ကျွန်တော်လည်း တွေ့လို့ လှန်ကြည့်မိတာပါ။ မဖတ်ရသေးပါဘူး။”
ကျွန်တော်အတွက် လိင်ကိစ္စကို အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ ပထမဆုံးဆွေးနွေးဖူးခြင်းဖြစ်၍ ရှက်ရွံ့မျက်နှာပူပြီး စကားလွှဲသည့်အနေဖြင့် “ကိုအောင်ကြီး ကော ဒေါ်ရွှေ”
“အာ ဒီကောင်လေး ၊သူ့မိန်းမ နဲ့ သူအိပ်ချင်အိပ်မှာပေါ့ နင်နဲ့ဘာဆိုင်သလဲ” ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို ထားကာ ထွက်သွားပါသည်။
လေအေးအေး လေးတိုက်နေသောနေရာတွင် သင်ဖြူးဖျာပေါ်လှဲရင်း နှင်းကို သတိရမိသည်၊ နှင်းအကြောင်းတွေးမိသည်။ ကြီးလာလျှင် နှင်းကို လက်ထပ်မည်။ ဘာမှန်းမသိသော စီးပွားရေးတွေ အများကြီးလုပ်ပြီး ကျွန်တော်ချမ်းသာလာသောအခါ ဘာမှန်းမသိသော အလုပ်တွေ နဲ့ အချိန်ပိုမရှိ မအားမလပ်ရအောင် အလုပ် များနေတဲ့ကြားမှ နှင်းကို ဂရုစိုက်မည်။ ပြီးတော့ နှင်းကို တကိုယ်လုံးချွတ်မည်။ နှင်းရဲ့ကြာမူပါသော အကြည့်လေးများ ကို တယုတယ ငေးကြည့်ရင်း ကျွန်တော်တို့ အချစ်နယ်ကျွန်ကြမည် စသဖြင့် ရောက်တတ်ရာရာများတွေး ရင်း ၊ အရက်သောက်၍ ပင်ပန်းသည်ကတစ်ကြောင်း၊ ညဉ့်နက်လာပြီး လေတဖြူးဖြူး အရသာကြောင့်တစ်ကြောင်း မှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားမိသည်။
အရက်သောက်ထားသူ ပီပီ အိပ်ရေးအတော်အတန်ဝ၍အရက်ရှိန်ကုန်သော် တရေးနိုးတော့သည်။ ခြင်တွေကလည်း ကိုက်သည်။ဗိုက်ကလည်း ဆာသည်။ ဆာသည်မှ ဗိုက်ထဲမှာ ပူနေအောင်ဆာသည်။ တစ်ခုခု စားချင်သည်။အိမ်တံခါးမကြီးက စိထားရုံသာ။ တွန်းဖွင့်လိုက်တော့ ကိုအောင့် ဆိုင်ကယ်က အတိုင်းသား။ ဆိုင်ကယ်ရှေ့ခြင်းထဲမှာ ကွမ်းထုပ်လေးတွေ့တော့ အကျင့်ပါနေတဲ့လက်က ကွမ်းထုပ်ကိုကောက်ဆွဲပြီး ကွမ်းတစ်ယာ ထုပ်ဝါးသည်။ ကွမ်းတံတွေးကို ပြောင်ရှင်းနေသော ဒေါ်ရွှေ့ အိမ်ရှေ့တွင် မထွေးလိုသည်နှင့် အိမ်ထောင့် မှောင်ရိပ်တွင်သွားထွေးသည်။ အကျင့်ပါနေသော မျက်စိက ဒေါ်ရွှေ့အခန်းကို အကြည့် အခန်းထဲမှ လျှံထွက်လာသော မီးရောင်တွင် လူရိပ်တွေ့လိုက်မိသည်။ လူပျိုပီပီ မစားရ ဝ ခမန်း အာသာ ငန်းငန်း ရမက်တွေကို ထိန်းဖို့ မစွမ်း တော့ စိတ်နောက် ကိုယ်ပါ ခဲ့ရပြန်သည်။ ဒေါ်ရွှေ့အခန်းရှေ့အမှောင်တွင် ခပ်တည်တည် ရပ်၍ ဖွင့်ထားသော တရုတ်ကပ်မှန်တွေ ကြားမှ ရဲရဲဝင့်ဝင့်ကြီးချောင်းသည်။ အလင်းထဲ က လူက အမှောင်ထဲက လူကို မြင်ဖို့ခက်သမို့ ရဲတင်းရဲသည်။
ဒေါ်ရွှေကတော့ မသပြေတို့ အခန်းနံရံကို နားနဲ့ ကပ်ပြီးနားစွင့် သလို လုပ်နေသည်။ ဒေါ်ရွှေ ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာ ချက်ခြင်းသဘောမပေါက်။ ကျွန်တော်လည်း မသပြေတို့ တရုတ်ကပ်နားတိုးကာ
ချောင်းကြည့်သည်။ မှောင်မှောင်မဲ။နားစွင့်မိသည်။ဘာမှ မကြား။ ကြိုးစား၍ နားထောင်ကြည့်သည်။
မသပြေ အသံချိုချိုလေး တိုးတိုးကြားရသည်။
“ဟယ်.. ကို ကလည်း” ဆိုတာပဲသေချာ ကြားလိုက်သည်။ တိုးတိုးလေးတော့ ပြောနေကြသည်။ စကားလုံးတွေက မသဲကွဲ။အဝတ်အစား ချွတ်သံလိုလို ကြားရပြန်သည်။ ကျွန်တော်စိတ်တွေလှုပ်ရှားလာသည်။ ကိုအောင့် အသံမပီမသ ကြားရပြန်သည်။ ပြီးတော့ မွေ့ယာပေါ်မှာ လှုပ်ရှားသံလိုလို ဘာလိုလို ကြားရသည်။
“ပြွတ်”ခနဲ နမ်းသောအသံကြားရသည်။ တော်တော်ကြာကြာ ငြိမ်သွားသည်။
“အွင်းအင်း” ဆိုသော မသပြေအသံတိုးတိုးလေးကြားရသည်။ မွေ့ယာပေါ်မှ လှုပ်ရှားသံကြားရသည်။
အ ခနဲထိတ်လန့်သောအသံ၊ နောက်ပြီး အား ခနဲ အားရပါးရမအော်ရဲသဖြင့် အာ…ဟုနာကျင်မှုကို ခံစားသော အသံ။ အဲဒီနောက်က တစ်စုံတစ်ခုနှင့် ပါးစပ်ကို ပိတ်လိုက်သောအသံ အု ။
ကိုအောင့် အသံ ခပ်တိုးတိုး ကြားရပြန်သည်။ “….နော်” နောက်ဆုံး “နော်” ဆိုသော စကားတစ်လုံးသာ သဲကွဲသည်။
ပြီးတော့ “ပြွတ်” ခနဲ “ပြတ်” ခနဲလေးများ တော်တော်ကျယ်ကျယ် ကြားလာရသည်။မသပြေ ရဲ့ ညည်းသံလိုလို အသံလေးများ နည်နည်း ကျယ်လာသည်။ ကုတင်မှ “ကျွိကျိကျွိကျိ” မြည်သံ လည်း ထွက်လာတော့သည်။ မသပြေ ညည်းသံလေးများ ပီသလာသည်။ ကုတင်ပေါ်မှ စောင့်သံ လေးများ ပီပြင်လာသည် ထင်ရသည်။ ခံစားမှုက တွန်းပို့လိုက်၍ ခပ်တိုးတိုး ထွက်လာသော မသပြေ ရဲ့ ညည်းသံသည် ပီပြင်သည်ထက် ပီပြင်လာသည်။ သက်ပြင်းခပ်ပြင်းပြင်းရှိုက်သံ နှစ်ခု ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ပေါ်လာပြီးနောက် တစ်စုံတစ်ခု အိပ်ယာပေါ်သို့ ပစ်လဲကျသံ ခပ်တိုးတိုးထွက်လာသည်။ ပြီးတော့ အားလုံးက တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားသည်။
ကျွန်တော်ကား မုန်ယိုလေပြီ။ ဒေါ်ရွှေဖက် ပြန်လှည့်သည်။ ဒေါ်ရွှေသည် ပြတင်းပေါက်ဖက်ကို မျက်နှာလှည့်ကာ မသပြေတို့အခန်းနံရံတွင် နားကပ်ထားဆဲ။ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှ မပေါ်သော ဒေါ်ရွှေ့ကိုကြည့်ကာ ကိုယ့်ညီလေးကိုယ်ထုတ်ကာ ဆွမိသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဒေါ်ရွှေက နံရံတွင်ကပ်နားထောင်နေရာမှ အလန့်တကြား ခွာကာ ကုတင်ခြေရင်းတွေ လှန်းထားသော ထမီတစ်ထည်ကို ယူပြီး ချိုင်းကြားညှပ် လိုက်သည်။ ထို့နောက် မှန်တင်ခုံ ရှိသော ပြတင်းပေါက်ဖက်သို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်လျက် သူ့ပါးကို လက်ဖဝါးနဲ့ ခပ်ရွရွ လေးပွတ်၊ ပြေကျလုဖြစ်နေသော တပတ်လျှိုဆံထုံးကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် ပြန်ထုံးသည်။အပေါ်အင်္ကျီကြယ်သီးလေးများ တစ်လုံးစီ ဖြုတ်ကာ အင်္ကျီကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ ဖြူဖြူဝင်းဝင်း အိစက်တုန်ယင်နေသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဘော်လီအင်္ကျီသည် မနိုင်တနိုင့် ထိန်းထားသော်လည်း မို့မောက်လျှံထွက်နေသော အပေါ်ပိုင်း နို့အုံကိုတော့လုံလောက် အောင်ဖုံးဖိ မထားနိုင်ချေ..။
ကျွန်တော်က ဒေါ်ရွှေ့ကို ကြည့်၍ ကိုယ့်ညီလေးနဲ့ကိုယ်ဖြေဖျော်နေချိန်။
ဒေါ်ရွှေက မှန်ရှေ့တွင် အပေါ်အင်္ကျီချွတ်ထားချိန်…။
ထိုအချိန်လေးခဏမှာ ရေချိုးခန်းထဲသို့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ဝင်သဖြင့် ရေချိုးခန်းမီးကိုဖွင့်လိုက်ရာ ကျွန်တော်ရှိနေသောနေရာထိလင်းသော အပြင်ဖက်မီးပါ တစ်ပါတည်းတွဲလင်း လေတော့သည်။
ကျွန်တော်နှင့် ဒေါ်ရွှေသည် ပြတင်းပေါက် ဟိုဖက်ဒီဖက်မှ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ရင်း စက္ကန့်တော်တော်ကြာကြာ ကြောင်နေမိသည်။
ဒေါ်ရွှေသည် ပထမဆုံးသတိဝင်ကာ ထမီကို ရင်လျားလိုက်သည်။အခန်း တံခါးမဖက်ရှိရာ နောက်ဖက်သို့ဒေါနဲ့မော နဲ့ လှည့်ကာ တံခါးကိုဖွင့်ပြီးအပြင်ကိုထွက်လာလေသည်။ (ကျွန်တော့်ရှိရာ သို့လာခြင်းဖြစ်ဟန်တူ၏။)ကျွန်တော်လည်း ညီလေးကို နေရာမှန်ပြန်ရောက်အောင် ပို့ရင်း အိမ်ရှေ့ဖက်သို့ထရောသောပါး ပြေးသည်။
ရှက်လိုက်သည်မှာ ဆိုဖွယ်မရှိပြီ။ နေရာမှ ချက်ခြင်း မြေလျှိုးမိုးပျံသာ သွားချင်ပါတော့သည်။ ဒေါ်ရွှေကို မည်သို့မည်ပုံရင်ဆိုင် ရပါမည်လဲ..။
ဒေါ်ရွှေ့အိမ်ရှေ့ ဝင်းခြံသံပန်းတံခါး သည် သော့ခတ်လျက်။ ဘာမှ မစဉ်းစားနိုင်တော့ပြီ။ အုတ်တံတိုင်းကို ကျော်ခွ ၍ ကျွန်တော် အမှောင်ထုထဲသို့ မျက်နှာမူလိုက်သည်။ကြောက်ရွံ့ ရှက်အားငယ်စွာဖြင့် ဦးတည်ရာမဲ့ ပြေးထွက်လာခဲ့သည်။ နောက်မှ ဒေါ်ရွှေ အသံ ခပ်သဲ့သဲ့ကို ကြားလိုက် မိသည်။
“ဟဲ့ ….အနီကောင် ပြန်လာခဲ့”
ကျွန်တော် မရပ်မနားပြေးသည်။ တကိုယ်လုံး အေးစက်ပြီး အသက်မရှုနိုင်တော့လောက်အောင် ဖြစ်လာမှ ရပ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ရင်တစ်ခုလုံးသည် ပေါက်ထွက်မတတ်။ မောလွန်းလို့ ချောင်းတွေဆိုးပြီး ပါးစပ်ထဲမှ ချွဲဆန်ဆန် တံတွေးပစ်ပစ် များ အန်ထွက်ကုန်သည်။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်တော့ သစ်ပင်များ ခပ်အုပ်အုပ်ရှိနေသော ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း ရဲ့ နောက်ဖက် လမ်းကြားလေး။ သဲလေးတွေဖြူဖွေးနေသောလမ်းကြားလေး။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က အိမ်က စိတ်ဆိုးတိုင်း တစ်ယောက်တည်း သွားထိုင်တတ်တဲ့ နေရာလေး။ သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကို မှီပြီးထိုင်နေမိသည်။
ရက်စက်လွန်းလှတဲ့ မတော်မတည့်မှုတွေ စီရင်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘဝကို ကျွန်တော်နာကျည်းလာသည်။ ရင်ထဲမှာ ရှိုက်နေမိသည်။သို့သော် အသံမထွက်ရဲ။ တစုံတခုကိုကြောက်ရွံ့နေသလိုလို။ကျွန်တော်တကိုယ်လုံးသည် အဖိစီးခံ သက်သက်။
အေးခဲနေတဲ့ ကျွန်တော်ပုခုံးကို လက်နွေးနွေးတစ်ဖက် နဲ့ ထိလိုက်တော့ ကျွန်တော်တခြားကမ္ဘာမှ လက်ရှိကမ္ဘာကို ပြန်ရောက်လာသကဲ့သို့ တကိုယ်လုံးတုန်ပြီး လှည့်ကြည့်မိသည်။ ဒေါ်ရွှေ။ဒေါ်ရွှေ့မျက်နှာသည် စိုးရိမ်ကြောင့်ကျ မှုများဖုံးလွှမ်းနေ၏။
ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို သူ့ရင်ခွင်ထဲ ထည့်လိုက်သည်။ကျွန်တော်လည်း ဒေါ်ရွှေ့ကို တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားမိသည်။ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းဝယ် တမံကျိုးသလို မျက်ရည်များတဝေါဝေါ ကျလျှက်။ရင်ထဲမှ လှိုက်လှိုက်တက်လာသော ရှိုက်သံများသည် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျယ်လောာင်လာသည်။ဒေါ်ရွှေသည် ကျွန်တော့်မျက်နှာကို မော့ပြီး မျက်ရည်များကို သုတ်ပေးရင်း
“မငိုပါနဲ့ အနီကောင်ရယ်။တိတ်နော် တိတ်” ဆိုပြီး တဖွဖွ ပြောသည်။ မရ ကျွန်တော်ကား ငိုလျှက်..
ဒေါ်ရွှေက ကျွန်တော်မျက်နှာကို သူ့မျက်နှာနဲ့ကပ်လျှက်
“အနီကောင်က လိမ်မာပါတယ်။ မငိုနဲ့နော် တိတ်တော့ ဒေါ်ရွှေတို့ အိမ်ပြန်ကြရအောင်”
တိုးကပ်လာသော ဒေါ်ရွှေ့ပါးနုနုရဲ့အထိအတွေ့သည် ကျွန်တော့်ကို စတင်မြူစွယ်တော့သည်။သနပ်ခါးနဲ့ ချွေးတို့ ရောစပ် ထွက်ပေါ်လာသော မွှေးညှီညှီနံ့လေးသည် လည်း တဖက်တလှမ်းက လှုံ့ဆော်လာပြန်သည်။ကျွန်တော့် ကို ကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းလို့ မရခင်မှာပဲ ကျွန်တော့် ညီလေးက နိုးထ လာခဲ့လေပြီ။ ဒေါ်ရွှေ့ပါးပြင်ကို တရှိုက်မက်မက်နဲ့ နမ်းရှုံ့မိ၏။ ပါးစပ်ကလည်း ဒေါ်ရွှေ့ကို အရမ်းချစ်တာ ပဲ ဆိုပြီး လုံးလုံးထွေးထွေး နဲ့ ထွက်လာခဲ့သည်။ အရိုင်းလေး ကျွန်တော်သည် တကိုယ်လုံးမှ အားအင်တို့ ကို ဆန္ဒတစ်ခု လှုံဆော်မှုကြောင့် မိမိ လက်နှစ်ဖက်ဆီသို့ ထည့်ကာ ဒေါ်ရွှေ့ကို ပုခုံးမှသိုင်း၍ အားရပါးရ တိုးတိုး ဖက်ပါတော့သည်။ ဒေါ်ရွှေလည်း အငိုက်မိသွားသဖြင့် တကိုယ်လုံး ကျွန်တော့် ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေရပါတော့သည်။ ဒေါ်ရွှေ ရုန်းထွက်သလား မထွက်လား ကျွန်တော်မသိ။ ကျွန်တော်အတင်းတိုးဖက်ပြီး ပါးကို နမ်း၊လည်ပင်းကို နမ်း သဖြင့် ဒေါ်ရွှေ့ရဲ့ အိစက်နူးညံ့လှသော ရင်သားနှစ်မွှာကား ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်နဲ့ ထိနေလေသည်။ ထိုအထိအတွေ့သည်ကား ကျွန်တော့်ကို ကာမခံစားမှုကို အလွန် အားကောင်းစေ လေသည်။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲတွင် တစ်ခုခုဟာနေသလိုလို တစ်ခုခုကို ပြေးဆောင့်ချင်သလို ခံစားမှုနဲ့အတူ ဒေါ်ရွှေ့ကို တိုး၍တိုး၍ ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ သာဖက်နေမိပါသည်။
် “ဒူဝေ ဝေ”
ကြေးစည်သံနဲ့ အတူ လမ်းမကြီးပေါ် မှ သံဃာများ ဆွမ်းခံကြွ လာနေသည်ကို လှမ်းမြင်လိုက်ရသည်။ ကျွန်တော် အာရုံပြောင်းခိုက် ဒေါ်ရွှေ က ရုန်းထွက်သည်။ ပြီးတော့ နွမ်းလျော့သော လေသံဖြင့်
“အနီကောင် သား ဒေါ်ရွှေတို့ ပြန်ကြမယ်” ဆိုပြီး မတ်တပ်ရပ်ပြီး ပြန်လမ်းကို လေးကန်သောခြေလှမ်းများဖြင့် လှည့်ထွက်သွားသည်။
Posted by bluegyi at 06:20
yan naing soe 18 May 2013 at 03:38
yan naing soe 18 May 2013 at 03:42
ko pan 28 January 2014 at 04:19
MYAN HAU JOHN6October 2018 at 07:31
Too long to read but no interested portion found only unnessary points
were dominating the story.Sexual stories should be in brief&short to the fucking point.
(ကားဟောင်း) အပိုင်း ၁
့စေတနာလေးပါ ခိခိ အဆင်ပြေပါစေ..ဂလု
မြန်မာ စစ်တွေနော် အားသေပြီးလို့ တောင်အော်တယ်
ရှက်တယ် တဲ့ ရှက်ရင် မခံနဲ့ ပေါ့နော်